Nucleus ၌ကွဲပြားခြားနားသော Dopamine ထုတ်လွှတ်မှုဆိုင်ရာ Dynamics သည် Core နှင့် Shell ၏အမှားအယွင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ဖြည့်စွက်အချက်ပြချက်များကိုဖော်ထုတ်သည်။
နျူကလီးယပ် Accumbens Core နှင့်ရှဲလ်အတွက် differential Dopamine ဖြန့်ချိ Dynamics ကိုမှားယွင်းနေသည်ဘီဘာအိုနှင့်ယ့ Motivation (2015) အတွက်လိုက်ဖက်နေရင်မြန်အောင်ဖော်ပြ
မိုက်ကယ် P. Saddoris 1 ,2,
R. မာကု Wightman3နှင့်
Regina အမ် Carelli 2
+Show ကို Affiliate
စာရေးသူပံ့ပိုးမှုများကို: MPS နဲ့ FC အသင်းကိုဒီဇိုင်းသုတေသန; MPS နဲ့ FC အသင်းသုတေသနဖျော်ဖြေ; MPS နဲ့ FC အသင်း data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ; MPS, RMW နှင့် RMC စက္ကူရေးသားခဲ့သည်။
အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်, 19 သြဂုတ်လ 2015, 35(33): 11572-11582; doi: 10.1523/JNEUROSCI.2344-15.2015
ဤအ DA အချက်ပြမှုများ၏တိကျသောရည်ရွယ်ချက်နှင့် ပတ်သက်. ထိရောက်သောသဘောမတူလည်းမရှိသော်လည်း Mesolimbic dopamine (DA) phasically, အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူတွေစဉ်အတွင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ခန့်မှန်းအမှား (PE) မော်ဒယ်များမက်လုံးပေး salience (IS) စဉ်လေ့လာသင်ယူနေတဲ့အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုမော်ဒယ်များကတော့ DA signal ကိုတန်ဖိုးလှုံ့ဆော်မှု imbues နှင့်ဖြင့်လှုံ့ဆော်အပြုအမူလှုံ့ဆော်သည်ဟုငြင်းခုန်။ သို့သော် DA လွှတ်ရာနျူကလိယ accumbens အတွင်း (NAc) ပုံစံများသိသိသာသာငျဒသေအကြားကွဲပြားနိုင်ပြီး, ကဲ့သို့သော, ဤပုံစံများ differential PE ၏ရှုထောင့်မှအထောက်အကူများနှင့် IS တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီအကဲဖြတ်ရန်, ငါတို့ spatiotemporally sequential ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလှုံ့ဆော်မှုကွဲကွာစေတဲ့အမူအကျင့်တာဝန်စဉ်အတွင်း NAc ၏မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအတွက် DA လွှတ်ပေးရန်တိုင်းတာ။ တစ်စက္ကန့်လီဗာမှဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့ရန်, လြှပျစစျနည်းလမ်းများကြွက်တဦးတည်းလီဗာ (SL ရှာကြံ) ကိုနှိပ်ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြရသောရေတွင်းတစ်တွင်းသင်ယူဆာပကွင်းဆက်အချိန်ဇယားအတွင်း core နဲ့ shell ကိုအတွက် subsecond NAc dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုင်းတာရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည် (ယူပြီး; TL) နဲ့ဆက်နွယ်နေ မျိုးသုဉ်းနေစဉ်အတွင်းနောက်တဖန်အစားအသောက်ပို့ဆောင်မှုနှင့်။ အဓိကမှာတော့ phasic DA လွှတ်ပေးရေးကနဦး SL တင်ဆက်မှုကိုအောက်ပါအကြီးမြတ်ဆုံးခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆက်တွဲ TL နှင့်ဆုလာဘ်ဖြစ်ရပ်များအတွက်အနည်းငယ်မျှသာ။ ဆနျ့ကငျြ, phasic shell ကို DA အားလုံးတာဝန်ဖြစ်ရပ်များမှာခိုင်မာတဲ့လွှတ်ပေးရန်ပြသခဲ့သည်။ အချက်ပြ core ကို shell ကိုအတွက်အစည်းအဝေးများ၏အစနှင့်အဆုံးကိုအကြားလျော့နည်းသွားပေမယ့်မပေး။ shell ကို DA လွှတ်ပေးရေး TL စဉ်အတွင်းအများစုလျော့နည်းသွားသော်လည်းသုဉ်းစဉ်အတွင်းအဓိကအတွက်အထွတ်အထိပ် DA လွှတ်ပေးရေး, ချန်လှပ်မျှော်လင့်ထားသည့်ဆုလာဘ်စဉ်အတွင်းလွှတ်ပေးရန်အတွက် SL နှင့်ခေတ္တများအတွက်တန်းလျော့နည်းသွားပြသခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားဖြန့်ချိဒိုင်းနမစ်အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူများကွဲပြားသီအိုရီထောက်ပံ့နိုင်စွမ်းအပြိုင် DA အချက်ပြမှုများကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
သိသာထင်ရှားသောထုတ်ပြန်ချက် ဦးနှောက်အတွက် Dopamine အချက်ပြထိုကဲ့သို့သောသင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်သိမြင် functions များ, အမျိုးမျိုးများအတွက်အရေးကြီးပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ကယှဉ်ပြိုင်သီအိုရီ dopamine အပြုအမူတွေ-based ဆုချကိုအထောက်အကူပြုရန်မည်သို့သဘောမတူသော်လည်းတစ်ခုတည်း dopamine signal ကိုဤသိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထောက်ပံ့ဖို့လုံလောက်ကြောင်းယူဆနေသည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့နျူကလိယ accumbens အတွင်း Real-time dopamine လွှတ်ပေးရေး (midbrain dopamine အာရုံခံတဲ့မူလတန်းကျောင်းပစ်မှတ်) သိသိသာသာ core နဲ့ shell ကိုငျဒသေအကြားကွဲပြားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ shell ကိုအတွက်, dopamine လှုံ့ဆျောမှု-based သီအိုရီ (ဥပမာမက်လုံးပေး salience) နဲ့တသမတ်တည်းဖြစ်တယ်သော်လည်းအဓိကမှာတော့ dopamine ဒိုင်းနမစ် (ထိုကဲ့သို့သောဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားကဲ့သို့) သင်ယူမှု-based သီအိုရီနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် dopamine တိရိစ္ဆာန်များကြိုးအပြုအမူတွေကိုပိုကောင်းအောင်ကူညီ discrete ဆားကစ်အပေါ်အခြေခံပြီးမျိုးစုံနှင့်ဖြည့်စွတ်အခန်းကဏ္ဍကစားကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
အစာရှောင်ခြင်း-scan ကသိသိ voltammetry
ventral tegmental ဧရိယာ
သင်ယူမှုစပ်လျဉ်းအချက်ပြ dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို (DA) ကိုနားလည်ခြင်း, အပြုအမူများနှင့်စွဲအမူအကျင့်မှ neuroscience အတွက်ဗဟိုပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်ပြိုင်သီအိုရီများဟာ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) တွင် DAergic အာရုံခံတစ်အတော်လေးသေးငယ်တဲ့လူဦးရေကျယ်ပြန့်လေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့်အရေးယူဘို့ဆားကစ် modulate ဖို့ဦးနှောက်တစ်လျှောက်လုံးကိစ္စအတွက်ပို့ပေးသော mesolimbic DA စနစ်, ၏ခန္ဓာဗေဒအဖှဲ့အစညျးနှငျ့တသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်မကြာသေးမီကအထောက်အထားများကို DA အချက်ပြယခင်ကထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းထက်ပိုပြီးသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုအောက်ပါ phasic DA လွှတ်ပေးရေးကို (နျူကလိယ accumbens (NAc) အမာခံအတွက်မျှော်လင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဆုလာဘ်တန်ဖိုး scales, ဒါပေမယ့် Shell မဟုတ်နေ့ et al ။ , 2010; Sugam et al ။ , 2012) ။ ဆနျ့ကငျြ, မူးယစ်ဆေး-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် tastants ၏ hedonic အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးဆိုင်း (ထို NAc shell ကိုအတွက် DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်အပြောင်းအလဲများကို phasic မှဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီပေမယ့်အဓိကမဟုတ်ဝီ et al ။ , 2011) ။ နောက်ထပ်ကျနော်တို့နှင့်အခြားသူများသင်ယူတာဝန်များကိုစဉ်အတွင်း DA လွှတ်ပေးရေး (core နဲ့ shell ကိုအကြားကွဲပြားခြားနားလှုံ့ဆော်မှု encoded ကြောင်းပြသကြAragona et al ။ , 2009; Owesson-White က et al ။ , 2009; Badrinarayan et al ။ , 2012; Cacciapaglia et al ။ , 2012) ။ အဲဒီအစားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ DA signal ကို၏, ထို့နောက်ဤတွေ့ရှိချက် DA differential နှင့်သမ္မာသတိသင်ယူမှု, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောသတ်မှတ်ဆားကစ်အတွင်း plasticity ကိုထောကျပံ့ဖို့တိကျတဲ့ပစ်မှတ်ဒေသများမှဖမ်းယူနားဆင်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
သို့သော်ဤသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော DA အချက်ပြမှုများ၏တိကျသောလုပ်ငန်းဆောင်တာကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ကြသည်မဟုတ်။ တဦးတည်းသြဇာမော်ဒယ် DA အနာဂတ်ရလဒ်များအသင်းကိုမျှော်လင့် generate နှင့်ထိုခန့်မှန်းချက် [ခန့်မှန်းအမှား (PE)] တိကျမှုရှိမရှိတစ်ဦးဆုံးမဩဝါဒပေး signal ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်း posited သိရသည်။ DA အာရုံခံ (encoding ကဤအမျိုးအစားဖော်ပြရန်Schultz et al ။ , 1997; Schultz နှင့် Dickinson, 2000; Waelti et al ။ , 2001; Tobler et al ။ , 2003), မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အားလုံး optogenetically (ထို VTA ပြပွဲ PE-type အမျိုးအစားအချက်ပြအတွက် DA အာရုံခံဖော်ထုတ်ကြောင်းအတည်ပြုသော်လည်းCohen ကို et al ။ , 2012) ။ ဆနျ့ကငျြ, မက်လုံးပေး salience (IS) မော်ဒယ် (သူတို့အားရလဒ်များအဘို့စိတ်ခွန်အားနိုး drive ကိုဖန်တီး DA တန်ဖိုးထားစစ်ကူတွေနဲ့လှုံ့ဆော်မှုပဒေသာပင်များလည်းရန်ပြုမူကြောင်းအကြံပြုBerridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998; Robinson နဲ့ Berridge, 2008; Zhang က et al ။ , 2009; Berridge, 2012) ။ အလားတူ PE နှင့် IS မော်ဒယ်များသင်ယူမှု, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲ (၎င်း၏လိုအပ်ချက်မှလေးစားမှုနှင့်အတူ DA function ကိုများအတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မတူကွဲပြားဟောကိန်းများစေပေမယ့်Redish, 2004; Tindell et al ။ , 2009; Bromberg-မာတင် et al ။ , 2010; Berridge, 2012).
ရိုးရှင်းအေးစက်တာဝန်များကိုမှာ, phasic DA လွှတ်ပေးရေး (ဆိုလိုသည်မှာကြောင့်ဆုလာဘ်, ဒါမှမဟုတ် cue salience ခန့်မှန်းနေသည်?) ကုဒ်သွင်းဘာသိရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော် spatiotemporally တူညီသောတာဝန်အတွင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့်အဓိကလှုံ့ဆော်မှုသီးခြားအသုံးပြုပုံထိုသို့သောကနဦးခန့်မှန်း, သူတွေရဲ့စားသောက်အပြုအမူတွေ, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ပင်မျိုးသုဉ်းအဖြစ်အစိတ်အပိုင်းများ, ခွဲထုတ်ဖို့သင်ယူမှုနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်တိကျတဲ့ features တွေခွဲခြားစိတ်ဖြာမှုမှဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့, တဦးတည်းလီဗာအပေါ်ပုံနှိပျ [လီဗာ (SL) ရှာကြံ] ရှိရာကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးဆာပကွင်းဆက်အချိန်ဇယားကိုအသုံးပြုသောလုပ်ငန်းတာဝန်ဒုတိယဆည်းပူးနေလီဗာ (TL) ရက်နေ့တွင်ပုံနှိပျမှဝင်ရောက်ခွင့်ခွင့်ပြုသဖြင့်, TL အပေါ်ပုံနှိပျအစားအစာဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ ထို့ပြင်အဆိုပါ NAc core ကိုဖြစ်စေအတွက် Real-time DA လွှတ်ပေးရန်ပုံစံများကိုတိုင်းသို့မဟုတ်ကောင်းစွာလေ့ကျင့်သင်ကြားကြွက်များတွင် shell မှအစာရှောင်ခြင်း-scan ကသိသိ voltammetry (FSCV) သုံးပြီးကျနော်တို့ DA encoding က၏တာဝန်-ရွေးချယ် features တွေ NAc ငျဒသေအနှံ့ကွဲပြားပုံကိုမတူညီ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့လှုံ့ဆျောမှု (ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုအဆင့်) နှင့်ခန့်မှန်း (မျိုးသုဉ်း) ၏ရှုထောင့်ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်သည့်အခါဤအအချက်ပြမှုများသည် dynamically ပြောင်းလဲဘယ်လိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ PE နှင့်အတူမြင့်မားတသမတ်တည်းသော core နဲ့ shell ကိုအတွက် DA လွှတ်ပေးရေး differential ကိုပုံစံများလေ့လာတွေ့ရှိခြင်းနှင့်မော်ဒယ်များ IS အသီးသီးနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူများဖြည့်စွတ်ပေမယ့်ကွဲပြားရှုထောင့်ထောကျပံ့ပေးနိုငျကွောငျးမျိုးစုံ mesolimbic DA အချက်ပြမှုများ၏စိတ်ကူးကိုထောကျပံ့။
280-330 ဂရမ်အလေးချိန်တကျိပ်နှစ်ပါးသောအထီး Sprague-Dawley ကြွက်ဘာသာရပ်များအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ကြွက်တစ်ဦးချင်းတစ်ဦး 12 ဇအလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာနှင့်အတူသျောနှင့်ပေါ့ပေါ့တန်တန် Purina ဓာတ်ခွဲခန်းမရှိ 90% အခမဲ့-feed ကိုအလေးချိန်ထက်လျော့နည်း (10-15 ဂရမ်မှကန့်သတ်အစားအစာနေ့စဉ်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းစားသုံး sucrose ၏ ~2.7 ဆအပြင်, နေ့တိုင်း Chow ခဲ့ကြသည် ) ။ အစားအသောက်ကန့်သတ်အစားအသောက်ကြော်ငြာ libitum ပေးထားခဲ့ပါတယ်အခါ postsurgery ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလ, စဉ်အတွင်း မှလွဲ. အမူအကျင့်စမ်းသပ်ခြင်း၏ကြာချိန်ဘို့ရာအရပျ၌ရှိ၏။ အားလုံးလုပျထုံးလုပျနညျး Chapel Hill Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီမှာမြောက်ကာရိုလိုင်းနားတက္ကသိုလ်နှင့်အညီဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
စမ်းသပ်ခြင်းအခန်းများတစ်ခုချင်းစီကိုလီဗာနှင့်ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ခရိုနီများအကြားတစ်ဦးအစားအစာ receptacle positioned တန်းတူအကွာအဝေး (အထကျတဲ့ cue-အလင်းနှင့်အတူနှစ်ဦးကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ခရိုနီပါရှိသောCacciapaglia et al ။ , 2012) ။ တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်, တဦးတည်းလီဗာ (ဥပမာ, လက်ဝဲဘက်) အားလုံးစမ်းသပ်အစည်းအဝေးများများ၏ကြာချိန်များအတွက် SL အဖြစ် TL နှင့်အခြားလီဗာ (ဥပမာ, ညာ) သတ်မှတ်ထားသောခဲ့သည်။ အဆိုပါ TL နှင့် SL ၏ဘေးထွက်ဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီး counterbalanced ခဲ့သည်။
ကြွက်ပထမဦးဆုံးအစားအစာ-ခွက်ကို receptacle ထံမှ sucrose လုံးလေးများ (45 မီလီဂရမ်, Purina) ရရှိရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ တစ်ခုတည်း pretraining session တစ်ခုအတွင်းမှာတော့ 50 လုံးလေးများခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်ကြိမ် 30 s ကိုကျပန်းကိုအပ်။ , ကြွက်ထို့နောက်တစ်ခုတည်းနေ့စဉ်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူး sucrose လုံးလေးများမှလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ တုံ့ပြန်ဆာပပုံဖော်ဖို့, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပထမဦးဆုံး TL နှိပ်ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုခနျးထဲသို့ TL ရဲ့ extension ကိုအတူ coupled တိုက်ရိုက် TL အထက်တစ်ဦးအလင်း cue များ၏ illumination နှင့်အတူစတင်ပုံဖော်နေစဉ်အတွင်းတစ်ခုချင်းစီကိုရုံးတင်စစ်ဆေး [လီဗာထွက်တာ (TLO)] ။ တစ်ခုချင်းစီကိုယူပြီးလီဗာစာနယ်ဇင်း [TLP; 1့extension ကို၏အတွင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိုး 1 (FR15)] ပု receptacle သည် TL ၏ရုပ်သိမ်းမှုနှင့်, cue အလင်း၏ရပ်စဲသို့တစ်ခုတည်း sucrose တောင့် (45 မီလီဂရမ်) ၏ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ တိရိစ္ဆာန်များ 15 ့အတွင်း TL နှိပ်ဖို့ပျက်ကွက်လျှင်, လီဗာပြန်ရုပ်သိမ်းခြင်း, cue အလင်းငွိမျး, နှင့်တရားခွင်တစ်ခုပျက်ကွက်ကဲ့သို့ထင်မှတ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု 15 s ကို (အကွာအဝေး: 5-25 s ကို; ရက်ပေါင်း 1 နှင့်2ပုံဖော်) ၏ပျမ်းမျှအတူ variable ကို intertrial ကြားကာလများကကွဲကွာခဲ့ကြ, ပြီးတော့ပုံဖော်ရက်ပေါင်း 45-3 (အကွာအဝေးပေါ်4s ကိုပျမ်းမျှတိုးတက်: 30-60 s ကို) ။
အဆိုပါ TL အပေါ်တုံ့ပြန်တည်ငြိမ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းပြီးနောက်ကွင်းဆက်အချိန်ဇယားကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦး session တစ်ခုအတွက်2ပျက်ကွက်အမှားအယွင်းများထက်မပို) (သဖန်းသီး။ 1 A), ကနေအဆင်ပြေအောင် Olmstead et al ။ (2000)။ ကွင်းဆက်အချိန်ဇယားအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းစမ်းသပ်မှု SL (တိုက်ရိုက်အထက် SL ၏ extension ကိုနှင့် cue အလင်း၏တစ်ပြိုင်နက် illumination နှင့်အတူစတင်O) ။ တစ်ခုချင်းစီကို SLP (FR1) ကို TL ၏တင်ပြချက်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည် cue ၏ SL နှင့်ငြိမ်းအေး၏ရုပ်သိမ်းမှုO (လီဗာ extension ကို, cue အလင်း) ။ အထက်အဖြစ်, TL ပုံနှိပျအဆိုပါ cue အလင်းနှင့်အစာအာဟာရကိုသောက်သောခွက်ကိုတစ်ဦး sucrose တောင့်များ၏ပို့ဆောင်မှု၏ extinguishing, အ TL ၏ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုတစ် variable ကို 45 s ကို intertrial ကြားကာလ (အကွာအဝေး: 30-60 ့) ကကွဲကွာခဲ့ကြနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ session တစ်ခု 30 စမ်းသပ်မှုတွေပါဝင်သည်။ ကွင်းဆက်အချိန်ဇယား၏နေ့ 1 အဘို့, TL ၏ SL နဲ့ extension ၏ရုပ်သိမ်းမှုများအကြားအဘယ်သူမျှမနှောင့်နှေးရှိ၏။ နောက်ဆက်တွဲရက်ပေါင်းတွင်, 3-5 s ကိုတစ် variable ကိုကြားကာလ (VI ကို) ကို SL စာနယ်ဇင်းရုပ်သိမ်းမှုနှင့် TL ၏ extension ကိုအကြားမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦး VI ​​ကို 1-3 s ကို TL စာနယ်ဇင်းနှင့် sucrose အားဖြည့်များ၏ပို့ဆောင်မှုအကြားမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ variable နှောင့်နှေးကြွက်အချိန်ဖြစ်ရပ်များများ၏ပို့ဆောင်မှု predictively ရန်အဘို့အနိုင်စွမ်းပပျောက်ဖို့လေ့ကျင့်ရေး (FSCV အသံသွင်းမတိုင်မီဆိုလိုသည်မှာအားလုံးအစည်းအဝေးများ) စဉ်အတွင်းအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ကြွက်ကဒီကွင်းဆက်အချိန်ဇယားပေါ်တွင်သို့မဟုတ်သူတို့ခွဲစိတ် voltammetric မှတ်တမ်းတင်ဘို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးသောပြီးနောက် SL သို့မဟုတ် TL ဖြစ်စေတခုတခုအပေါ်မှာပျက်ကွက်ခြင်းမရှိဘဲနှစ်ခုဆက်တိုက်အစည်းအဝေးများ၏တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ပြသသည်အထိ5ဃများအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်အသံဖမ်းသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးပြီးနောက်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏အစိတ်အပိုင်းအစု (core ကိုအသံသွင်းသုဉ်းခံယူ: n = 3; shell ကိုအသံသွင်း: n = 7) ။ မျိုးသုဉ်းစဉ်အတွင်း SLO တင်ပြချက်များအသစ်တစ်ခုကိုစမ်းသပ်၏အစညွှန်ပြ။ SL ပုံနှိပျအဆိုပါ TL ၏တင်ပြချက်များအတွက်ရလဒ်ဘယ်မှာစုံစမ်းစမ်းသပ်မှု session တစ်ခုအတွက်သူတို့အားတူညီခဲ့ကြသည်O4့နောက်ပိုင်းမှာပေမယ် TL အပေါ်ပုံနှိပျအားဖြည့်မခံခဲ့ရပါ။ ကြွက် 10 ဆက်တိုက်စမ်းသပ်မှုတွေ (များအတွက် SL အပေါ်တုံ့ပြန်ရပ်တန့်သည်အထိသုဉ်းအစည်းအဝေးများဆက်လက်သဖန်းသီး။ 1 B).
ယခင်လေ့လာမှုများ (Schoenbaum et al ။ , 2003; Saddoris et al ။ , 2005) limbic လှုပ်ရှားမှုအာရုံကြောဆက်စပ်သင်ယူမှုနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်ပြောင်းလဲမှုများဖို့အလွန်အမင်းထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းပြသပြီ, အရှင်ကဒီမှာကျနော်တို့ (တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်လုပ်ကွက်သတ်မှတ်တုံ့ပြန်အောင်းနေချိန်အမှတ်အသားများကိုအသုံးပြုသဖန်းသီး။ 1 B) ။ ပထမဦးဆုံးအပိတ်ပင်တားဆီးမှုတစ်ခု SL ဘို့ရာအတွက်တုန့်ပြန်အောင်းနေချိန်အစောပိုင်းသုဉ်းခဲ့P တုန့်ပြန်သည့်အကြိုးကိုပေး session တစ်ခုဆင်တူခဲ့သည်။ ထို့နောက်ပထမဦးဆုံး SLP ကြာကြာယခင်ကဆုခခြံကွင်းဆက် session တစ်ခုအတွင်းမှာထက်မှာအနည်းဆုံး2SD ကခဲ့ကြောင်းတုန့်ပြန်အောင်းနေချိန်နှောင့်နှေး Extinction ၏အစဟုမှတ်သားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, ပထမဦးဆုံးချန်လှပ်တုံ့ပြန်မှုနောက်တော်သို့လိုက်သောသူအပေါင်းတို့သည်စမ်းသပ်မှုတွေနှောင်းပိုင်းသုဉ်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုရှိကြ၏, ထိုကြွက်တစ်ဦး SL ချန်လှပ်ခြင်းရှိမရှိအားဖြင့်အုပ်စုဖွဲ့ခဲ့ကြသည်P တုန့်ပြန် (နှောင်းပိုင်းတွင်အဘယ်သူမျှမစာနယ်ဇင်း) သို့မဟုတ် (လနှောင်းပိုင်းသတင်းမီဒီယာ) တုံ့ပြန်ပြန်လည်စတင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ အားလုံးသုဉ်းအပြုအမူဟာချက်ချင်းရှေ့အားဖြည့်ကွင်းဆက်အချိန်ဇယားနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ပါတယ်။
အမူအကျင့်သင်တန်းပေးခြင်းပြီးနောက်တိရိစ္ဆာန်များခွဲစိတ် (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ voltammetric အသံသွင်းဘို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်Cacciapaglia et al ။ , 2012) ။ အတိုချုပ်, ကြွက် ketamine Hydrochloride (100 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, im) နှင့် xylazine Hydrochloride (20 / ကီလိုဂရမ် mg) ရောနှောထားတဲ့အသားထိုးဆေးနှင့်အတူ anesthetized ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကလမ်းညွှန် cannula (Bioanalytical စနစ်များ) ကို NAc shell ကို (+ 1.7 မီလီမီတာ AP + 0.8 မီလီမီတာ ML) သို့မဟုတ် core ကို (+ 1.3 မီလီမီတာ AP + 1.3 မီလီမီတာ ML) ဖြစ်စေအထက်ထဲထညျ့ခဲ့သညျနှင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်း (ပလတ်စတစ်တစ်ခုမှာ) ကိုနှိုးဆွတဲ့စိတ်ကြွထဲတွင်နေရာခဲ့သည် အဆိုပါ VTA (-5.2 မီလီမီတာ AP + 1.0 မီလီမီတာ ML နှင့် -7.8 DV) ။ ရည်ညွှန်း Ag / AgCl လျှပ်ကူးပစ္စည်းများအတွက်နောက်ထပ်လမ်းညွှန် cannula အဆိုပါ contralateral hemisphere ထဲတွင်နေရာခဲ့သည်။ components screw နှစ်ခုနှင့် cranioplastic ဘိလပ်မြေနှင့်အတူဦးခေါင်းခွံမှလုံခြုံခဲ့ကြသည်။
ဒီနေရာမှာအသုံးပြုခဲ့ FSCV မှတ်တမ်းတင်နည်းစနစ်ယခင်ကအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ခဲ့ကြသည် (Cacciapaglia et al ။ , 2012; Sugam et al ။ , 2012) ။ အတိုချုပ်, ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးနောက်, ကြွက်သူတို့ရဲ့ presurgery ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် (နာလန်ထူအနည်းဆုံး5ဃ) မှပြန်လည်နာလန်ထူရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှု၏နေ့တစ် Carbon-fiber microelectrode အတွက် Ag / AgCl ရည်ညွှန်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းအားမရပြီးနောက်တစ်ဒေသအလိုက်ဆောက်လုပ်ထား microdrive (ဓာတုဗေဒဦးစီးဌာနအီလက်ထရောနစ် Facility, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားတက္ကသိုလ်, Chapel Hill, NC) နှင့်အတူ NAc shell ကိုသို့မဟုတ် core ကိုသို့လျှော့ချခဲ့သည် အဆိုပါ contralateral hemisphere ။ အဆိုပါ Carbon-fiber microelectrode Ag / AgCl ရည်ညွှန်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှိုင်းယှဉ် -0.4 V ကိုမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အခါအားလျော်စွာတစ်သိသိ voltammogram တစ်ခုချင်းစီကိုမှတ်တမ်းတင် session ရဲ့စတင်ခင်မှာပြန် -100 V. မှ 1.3 V နှငျ့ဖို့အလားအလာကားမောင်းတဲ့တြိဂံ waveform လျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့် (0.4 ms ကြားကာလ) ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်, ကျနော်တို့စိတ်ကြွလှုံ့ဆော်မောင်းနှင်အားဖြင့်လျှပ်စစ် evoked DA လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ရပ်များရရှိသော အဆိုပါ VTA အတွက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် NAc အတွက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ DA လွှတ်ပေးရန်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ တစ်ဆွ DA လွှတ်ပေးရေးကိုဆွဲထုတ်မှာမအောင်မြင်ခဲ့ပါလျှင်, လျှပ်ကူးပစ္စည်းသစ်တစ်ခုတည်နေရာလျှော့ချခဲ့ပါတယ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ထပ်ခါတလဲလဲခဲ့သည်။ လျှပ်စစ်ဆွအောင်မြင်စွာ NAc အတွက် DA လွှတ်ပေးရန် evoked ပြီးတာနဲ့ evoked DA လွှတ်ရာလေ့ကျင့်ရေးထားသည့်စိတ်ကြွ VTA လျှပ်ကူးပစ္စည်းကနေ (10 နှင့် 60 Hz ကြား) ကြိမ်နှုန်းနှင့် (4 ထံမှ 25 မှ) biphasic ပဲမျိုးစုံအရေအတွက်လှုံ့ဆော်ပေါင်းစပ် အသုံးပြု. ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အသံသွင်းတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်များတွင်တစ်ဦးအပိုဆောင်းလေ့ကျင့်ရေး set ကိုအဲဒီ session ကူးလျှပ်ကူးပစ္စည်းတည်ငြိမ်ရေးသေချာစေရန်အမူအကျင့် session ရဲ့အဆုံးကိုအောက်ပါဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကြွက်၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ခုနှစ်တွင် (n = 9), စမ်းသပ်မှု 30 ကိုအပြည့်အဝ session တစ်ခုမှတ်တမ်းတင်ပြီးနောက်, အခြားလွှတ်ပေးရန် site ကိုမတွေ့ရှိမှီတိုင်အောင်, လျှပ်ကူးပစ္စည်းအခြားစမ်းသပ်မှု 300 စမ်းသပ်မှု၏အခြား session တစ်ခုအတွက်ယူခဲ့ပါတယ်သောအချက်မှာသည်အခြား the30 μmလျှော့ချခဲ့သည်။ FSCV အချက်အလက်များ၏လေ့လာမှု (HDCV Analysis) သည် DA ပြောင်းလဲမှုကိုထုတ်ယူရန်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအဓိကအစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုအသုံးပြုသည်။ DA သည်ဘာသာရပ်တစ်ခုစီ၏လျှပ်စစ်လှုံ့ဆော်မှုသင်တန်းကို အသုံးပြု၍ စမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီကောက်ယူထားသောယခင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်းHeien et al ။ , 2005; Keithley et al ။ , 2010) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုဒေသ (core နဲ့ shell ကို) များအတွက်ပျမ်းမျှ DA အာရုံစူးစိုက်မှုသဲလွန်စချက်ချင်း SL ရှေ့တော်၌5s ကိုအခြေခံကျော်တစ်ဦးချင်းစီအမူအကျင့်အဖြစ်အပျက်မှ aligned နှင့်ပျမ်းမျှ DA အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်O ဘာသာရပ်ပျမ်းမျှအပေါ်: တစ် Two-လမ်းရောထွေးမော်ဒယ် ANOVA (ဖြစ်ရပ်, ဒေသအချက်များ) ကို အသုံးပြု. စတင်ခြင်း။
မျိုးသုဉ်းအစည်းအဝေးများအဘို့, DA ခြေရာတွေထိုနည်းတူအဆိုပါအပြုအမူဖြစ်ရပ်များမှ aligned ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်များစွာသော SL ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့O တင်ပြချက်များသုဉ်းအတွက်မဆိုပုံနှိပျခွငျးအားဖွငျ့နောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်မဟုတ်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောစမ်းသပ်မှုများကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးဆုံးအဘို့, DA ခြေရာတွေကို SL ဖို့ aligned ခဲ့ကြသည်O နှင့်မျိုးသုဉ်း၏အဆင့်အားဖြင့်အုပ်စုဖွဲ့ (ကြည့်ရှု သဖန်းသီး။ 6), နှင့်အချက်များအဖြစ်သုဉ်းအဆင့်နှင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုဖြစ်ရပ်သုံးပြီး Two-လမ်းထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံကို အသုံးပြု. ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ကြွက်ဟာ TL ဖိထားတဲ့အတွက်ဒုတိယခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်သာစမ်းသပ်မှုတွေP အသုံးပြုခဲ့ကြသည်နှင့်အမြင့်ဆုံး DA ပြင်းအား (ထိုဖြစ်ရပ်သည်အောက်ပါ 300 ms အတွင်းဆိုလိုသည်မှာအများဆုံး DA လွှတ်ပေးရန်) နှစ်ဦးစလုံး TL များအတွက်ရရှိသောခဲ့ကြသည်P ထိုနည်းတူဆုလာဘ်များနှင့် ANOVA အချက်များအဖြစ်သုဉ်းအဆင့်နှင့်တာဝန်လှုံ့ဆော်မှုသုံးပြီး Two-လမ်းထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံတွေနဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အားလုံး post ကို hoc တွဲဖက်နှိုင်းယှဉ်မှုများသည် Tukey's HSD ကို အသုံးပြု၍ မညီမျှမှုအတွက်တည့်မတ်ခဲ့သည် N လာသောအခါသင့်လျော်သော။ အားလုံးစာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း Prism ကို Windows အတွက် 4.0 (GraphPad Software များ) သို့မဟုတ် Windows အတွက် Statistica (StatSoft) ကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်မှုပြီးနောက်ကြွက်နက်ရှိုင်းစွာတစ်ဦး ketamine (100 / ကီလိုဂရမ် mg) / xylazine (20 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) အရောအနှော (IM) နှင့်အတူ anesthetized ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်းအသုံးပြုအတူတူ micromanipulator ၌ကျိန်းဝပ်တစ်ဦးကအဖြိုက်နက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းစမ်းသပ်မှတ်တမ်းတင် site ကိုမှလျှော့ချခဲ့သည်နှင့်အသေးငယ်တဲ့လျှပ်တွေ့ရှိရပါသည်သည့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအစွန်အဖျားများ၏အနေအထားအထိမ်းအမှတ် (50-500 μA,5s) ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ မျိုးစုံအသံသွင်းပြုမိခဲ့သည့်အခါလုပ်ဘယ်မှာအကွိမျမြားစှာကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဦးနှောက်, ဖယ်ရှား 4% Formaldehyde အတွက် fixed, ပြီးတော့တစ်ဦး cryostat နှင့်အတူ 80 μm Coronal ကဏ္ဍများသို့လိုက်သည်ကိုမခံရမီ -40C မှအေးခဲခဲ့သည်။ ကဏ္ဍများ (ဆလိုက်ပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားတောက်ပ-Field microscopy နှင့်အတူကြည့်ရှုဒီဂျစ်တယ် imaged ခဲ့ကြသည်သဖန်းသီး။ 1 C).
core နဲ့ shell ကိုအတွက်စိတ်ကြွဆေးနှင့်ဖြစ်ရပ်-evoked DA လွှတ်ပေးရန်၏နှိုင်းယှဉ်။
ဒါဟာအမူအကျင့်ဖြစ်ရပ်များအတွက် core နဲ့ shell ကို DA လွှတ်ပေးရန်အကြားမြင်ကြခြားနားချက်များကိုမဖြန့်ချိဒိုင်းနမစ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဖို့, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲဒေသအကြား DA ရှင်းလင်းရေး၏ kinetics အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, striatal DA လွှတ်ပေးရန်နှင့်လွှာမှဒိုင်းနမစ်ကြောင့် core ကို shell ကိုအတွက် dopamine ပို့ဆောင်ရေးတစ်ဦးအောက်ပိုင်းသိပ်သည်းဆ (ထက် shell ကိုအတွက်နှေးကွေးဖြစ်ပါသည်ဂျုံးစ် et al ။ , 1996; Budygin et al ။ , 2002) ။ နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ရပ်များ (ဥပမာ, TL မှာ core နဲ့ shell ကိုအကြားထိုကဲ့သို့, ကွဲပြားခြားနားမှုအဖြစ်O, ဆုလာဘ်) အခွံထဲမှာ Synaptic ဒေသတွင်း၌ကျန်နေတဲ့ DA များ၏ဇွဲနေဖြင့်ရှင်းပြနိုင်ဘူး။
ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြေရှင်းရန်, ငါတို့အမူအကျင့်ဖြစ်ရပ်များ (ဆိုလိုသည်မှာ, SL အားဖြင့်ရူးနှမ်း DA လွှတ်ပေးရန်နှင့်လွှာမှပုံစံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါO) VTA afferents ၏လျှပ်စစ်ဆွ၏အကျဉ်းပေါကျကှဲအားဖြင့်ထုတ်ယူ DA ဖို့ကွင်းဆက်အချိန်ဇယားကိုတာဝန်စဉ်အတွင်း။ တည်ဆောက်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မူလအားဖြင့် VTA အမျှင်များ၏လျှပ်စစ်ဆွ (2 ms biphasic ပဲမျိုးစုံ) ကိုလှုံ့ဆော်မှုကြိမ်နှုန်း (10-60 Hz) နှင့် pulse နံပါတ်များ (၄-၂၅ ပဲမျိုးစုံ) တွင်ကျယ်ပြန့်သောလှုံ့ဆော်မှုကြိမ်နှုန်းနှင့် Pulse နံပါတ်များ (၄-၂၅ ပဲမျိုးစုံ) တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ chemometric လေ့ကျင့်ရေးအစု။ ထို့ကြောင့်လျှပ်စစ်လှုံ့ဆော်မှုအမြောက်အများ (ဥပမာအားဖြင့် ၂၀၀၀ nm) သည်သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်နေသောယာယီများ (ပုံမှန်အားဖြင့် 4-25 nm) ထက်ပိုမိုများပြားသည်။ DA ထုတ်လွှတ်မှုအလွန်အမင်းကြီးမားသောပမာဏတွင် DA သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်ပြည့်နှက်လာပြီးပုံမှန်အကွာအဝေးတွင်တွေ့ရမည့်အစားရှင်းလင်းရေးကိရိယာများကိုနှေးကွေးစေသည်။ ဤအရာကိုတိုက်ရိုက်ဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် DA ဆန့်ထုတ်မှုအမြင့်ဆုံး <2000 nm ဖြစ်သောလျှပ်စစ်လှုံ့ဆော်မှု "စမ်းသပ်မှုများ" ကိုသာရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အလားတူစွာကျွန်ုပ်တို့သည်အမြင့်ဆုံး DA လွှတ်ပေးမှုကို SL နှင့်ကိုက်ညီသောအပြုအမူဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများကိုသာရွေးချယ်ခဲ့သည်O အနည်းဆုံးအား 100 nm ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်, အားလုံးရထိုက်ခွင့်စမ်းသပ်မှုတွေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ပျမ်းမျှခဲ့ကြသည်။ ဒီမက်ထရစ်ကိုသုံးပြီးကျနော်တို့ 23 လျှပ်စစ်စိတ်ကြွဆေးနှင့်အမာခံအတွက် 15 cue-evoked အစည်းအဝေးများရရှိသောနှင့် 14 လျှပ်စစ်စိတ်ကြွဆေးနှင့် shell ကိုအတွက် 11 cue-evoked အစည်းအဝေးများ။
လျှပ်စစ်-evoked DA လွှတ်ပေးရန်နှိုင်းယှဉ် cue- ၏နှိုင်းယှဉ်အများအပြားမက်ထရစ်ကို အသုံးပြု. ပြုမိခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာအထွတ်အထိပ် DA SL မှာအမူအကျင့်ဖြစ်ရပ်များမှဆင်းသက်လာခဲ့သည်O 1.5 s ကို SL အတွင်း (ဆိုလိုသည်မှာအကြီးမြတ်ဆုံး DA အာရုံစူးစိုက်မှုO စတင်ခြင်း), TLO4နှင့် 5.5 s ကိုအောက်ပါ SL အကြား (အကြီးမြတ်ဆုံး DA အာရုံစူးစိုက်မှုO စတင်ခြင်း) နှင့်ဆုလာဘ် 6.5-8 s ကိုအောက်ပါ SL အကြား (အကြီးမြတ်ဆုံး DA အာရုံစူးစိုက်မှုO cue ဖြစ်ရပ်များအဘို့နှင့်လျှပ်စစ်စိတ်ကြွဆေးဖြစ်ရပ်များ (ဆိုလိုသည်မှာ, တစ်ချိန်တည်းမှတ်ပေမယ့်အောက်ပါဆွစတင်ခြင်းထက် SL များအတွက်သက်ဆိုင်ရာအချိန်အချက်များမှာစတင်ခြင်း)O စတင်ခြင်း) ။ ယင်းနောက်ရှင်းလင်းရေးဒိုင်းနမစ်ကိုယခင်ကထုတ်ဝေမက်ထရစ် (ကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာခဲ့ကြသည်Yorgason et al ။ , 2011) ။ အထူးသကျနော်တို့အထွတ်အထိပ်အောက်ပါဝက်ဘဝ (အထွတ်အထိပ်အာရုံစူးစိုက်မှု၏အာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ဝက်) အားအောင်းနေချိန်မှာကွညျ့ရှု T 20 (အထွတ်အထိပ်ကနေ 20% ပျက်စီးယိုယွင်းများအတွက်အချိန်) နှင့် T 80 (အထွတ်အထိပ်ကနေ 80% ပျက်စီးယိုယွင်းဘို့အချိန်) ။ ဤရွေ့ကားတန်ဖိုးများဒေသ (core ကို, အခွံ), ဆွအမျိုးအစား (SL သုံးပြီးရောထွေး-မော်ဒယ် ANOVA သုံးပြီးနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်O အကြား-ဘာသာရပ်များအကြောင်းအချက်များနှင့်ဖြစ်စေ DA အာရုံစူးစိုက်မှုကဲ့သို့) aligned, လျှပ်စစ်စိတ်ကြွဆေးအသီးအသီးဖြစ်ရပ်အမျိုးအစား (အခြေခံ, SL မှာO, TLOနှင့်ဆုလာဘ်) သို့မဟုတ်ယိုယွင်းအတိုင်းအတာအထွတ်အထိပ်မှ (latency, T 20တဝက်-အသက်, T 80အသီးသီး) ထပ်ခါတလဲလဲအတိုင်းအတာအဖြစ်။ post ကို hoc Tukey's HSD ကိုနှိုင်းယှဉ်။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်သည် N.
ကြွက်လျှင်မြန်စွာကွင်းဆက်အချိန်ဇယားကိုတာဝန်ယူခဲ့သညျ။ တိကျစွာစမ်းသပ်မှုတွေ၏ပျှမ်းမျှပြီးစီး 99.8% အပေါ်နောက်ဆုံး presurgery session တစ်ခုတွင်, ကြွက်များ။ သူတို့အားအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းကြွက် SL အောက်ပါသတင်းစာမှပျမ်းမျှအား 783 ± 253 ms အပေါ်ကိုယူOနှင့် 588 TL ပြီးနောက်နှိပ်ဖို့ 298 ms ±Oနီးပါးသိသိသာသာခဲ့တဲ့ကွာခြားချက်, t (17) = 1.77, p = 0.085 သို့သော် postsurgical အသံဖမ်းရက်, ကြွက်များကိုထပ်နီးပါးမျှပျက်ကွက် (99.5%) ကိုဖန်ဆင်း, ဒါပေမယ့် TL ဘို့သိသိသာသာပိုမြန်တုံ့ပြန်မှု latency ပြသP SL ထက် (999 64 ms ±)P (444 ± 39 ms), t (29) = 7.48, p <0.0001 ။ အရေးကြီးသည်မှာမှတ်တမ်းတင်သည့်အချိန်တွင်အခွံတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အဓိကနှိုင်းယှဉ်ချက်တွင်တုန့်ပြန်မှုနှေးကွေးခြင်းမရှိပါ။ t (29) = 0.78, p = 0.48 ။ ထို့ကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများ (core နဲ့ shell ကို) တွင်ကြွက်များ task ကိုအားဖြည့်ခဲ့ပါတယ်အခါကွင်းဆက်အချိန်ဇယားကိုဖြည့်စွက်ဖို့အညီအမျှအရည်အချင်းရှိကြ၏။
အားဖြည့်ကွင်းဆက်အချိန်ဇယားစဉ်အတွင်း NAc core နဲ့ shell ကိုအတွက် differential DA လွှတ်ပေးရန်
Next ကိုကျနော်တို့ကို (NAc core ကိုဖြစ်စေခြင်းမှ real-time DA အသံသွင်းရရှိရန် FSCV ကိုအသုံးပြုn = 13) သို့မဟုတ် shell ကို (n ရေတွင်းသင်ယူကွင်းဆက်အချိန်ဇယားအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်စဉ်အတွင်း = 12) (သဖန်းသီး။ 1 C) ။ မျိုးစုံအသံသွင်းယူရာကြွက်များတွင်, လျှပ်ကူးပစ္စည်းအစွန်အဖျားဟာ 300 μm Carbon-fiber ကိုလျှပ်ကူးပစ္စည်းအစွန်အဖျားအသီးအသီးမှတ်တမ်းတင်ဘို့လတ်ဆတ်တဲ့တစ်သျှူးအတွင်းလုံးဝခဲ့တာ။ သေချာစေရန်အစည်းအဝေးများအကြားကအနည်းဆုံး 100 μmလျှော့ချခဲ့သည် နှစ်ဦးစလုံးနှင့်ကိုက်ညီ PE နှင့် IS မော်ဒယ်ကျနော်တို့ SL နှင့် cue အလင်းစတင်ခြင်းနှင့်အတူစတင်ခဲ့ကြောင်းကြံ့ခိုင် phasic DA လွှတ်ပေးရေး (SL ကိုတွေ့O) core နဲ့ shell ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်။ (30 စမ်းသပ်မှုတွေကိုဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှ) ကိုယ်စားလှယ်မှတ်တမ်းတင်အစည်းအဝေးများမှဤအချက်ပြ၏ဥပမာများ (အဓိကအဘို့အပြနေကြသည်သဖန်းသီး။2A) နှင့် shell ကို (သဖန်းသီး။2B), တစ်ဦးချင်းတိရိစ္ဆာန်ကနေအရောင်ကွက်နှင့်အတူ။ DA အချက်ပြငျဒသေအကြားသိသိသာသာကွဲပြားပါတယ်။ အဓိကအားလုံးကိုကြွက်, (တလွှားသဖန်းသီး။2ကို C-Eအနက်ရောင်ခြေရာတွေ), DA အရှိဆုံးကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် cue (SL စတင်ခြင်းမှာလျှင်မြန်စွာသည်အထွတ်အထိပ်သို့O စတင်ခြင်း) နှင့်ထို့နောက်အလျင်အမြန် TL ၏အချိန်အားဖြင့်အခြေခံမှငြင်းဆိုခဲ့သည်P။ ဆနျ့ကငျြ, (shell ကိုအတွက်သဖန်းသီး။2ကို C-Eမီးခိုးရောင်ခြေရာတွေ), DA အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်လျင်မြန်စွာတိုး SL နှင့်အတူတိုက်ဆိုင်ခဲ့သည်O TL မှာ discrete ထိပ်နှင့်အတူအခြားအ motivationally အဓိကလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်မြင့်မားသောတင်ဆက်မှုများနှင့်ကျန်ရစ်O နှင့်တရားခွင်ရဲ့အဆုံးမှာအခြေခံမှမပြန်မီပေးပို့ဆုချ။
A , တာဝန်ဒီဇိုင်းသိထား။ ကွင်းဆက်အချိန်ဇယားစဉ်အတွင်းတဦးတည်းလီဗာ (SL) SL (က cue အလင်းလီဗာအထက်တွင် illuminated ခံခဲ့ရသည်အဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာစမ်းသပ်ခနျးထဲသို့တိုးချဲ့ခဲ့သည်O) ။ SLP အလင်းကိုငွိမျးနှင့်လီဗာပြန်ရုပ်သိမ်း။ တစ်ဦးနှောင့်နှေးပြီးနောက်, (အခနျးထဲမှာအခြားလီဗာ (TL) တိုးချဲ့ခဲ့ပါတယ်နှင့်ဆက်စပ် cue အလင်း illuminated TLO) ။ အဆိုပါ TL အပေါ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (TL အောက်ပါP) ကြွက်တစ်ဦးနှောင့်နှေး (R) အပြီးအစားအသောက်အားဖြည့်ရရှိခဲ့သည်။ B , အဓိကသို့မဟုတ် shell ကိုအတွက် FSCV အသံသွင်းနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များအတွက်မျိုးသုဉ်းအပြုအမူ။ မျိုးသုဉ်းခြင်းအတွက်အပြုအမူနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုကြွက်များ၏အပြုအမူအပေါ်အခြေခံပြီးပိတ်ပင်တားဆီးမှုဖြင့်အုပ်စုဖွဲ့ခဲ့သည်။ ဖြစ်ရပ်များကိုမျိုးသုဉ်းမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်ရှေ့ပြေးရှေ့ပြေးကွင်းဆက်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ စောစောမျိုးသုဉ်းခြင်းသည်စမ်းသပ်မှုအားလုံးဖြစ်သည်။ SL အပေါ်ပထမဆုံးသိသိသာသာနှောင့်နှေးသောတုန့်ပြန်မှုမတိုင်မီအထိ၊P နှင့် SL အောက်ပါပထမဦးဆုံးချန်လှပ်စာနယ်ဇင်းO တင်ပြချက်။ နှောင်းပိုင်းသုဉ်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွင်းမှာပဲဘာသာဂုဏ်ထူးဘာသာရပ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်မှုချန်လှပ်ခြင်းရှိမရှိတို့အကြားလုပ်ခဲ့ကြသည်။ C အဆိုပါ core ကိုအတွင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းနေရာချထားမှုကို၏တစ်သျှူးဆိုင်ရာဘာသာရပ် (အနက်ရောင်စက်ဝိုင်း) နှင့် medial shell ကို (မီးခိုးရောင်စက်ဝိုင်း) ။
အဆိုပါချည်နှောင်အချိန်ဇယား၏စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ NAc အတွင်းကွဲပြားခြားနားသော DA လွှတ်ပေးရန်ဒိုင်းနမစ်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဓိကအတွက် Dopamine လွှတ်ပေးရန်ဒိုင်းနမစ် ( A ) နှင့် shell ကို ( B ) ကို NAc ၏အခနျး (SL သို့ SL တိုးချဲ့မှု၏အချိန် alignedO) ။ အရောင်အသီးသီး, အ core နဲ့ shell ကိုတစ်ကိုယ်စားလှယ်ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းစီမှပြပွဲပျမ်းမျှကြံစည်။ အဆိုပါ TL extension ကို၏ပျမ်းမျှအချိန် (▴) (TLO) နှင့်ဆုလာဘ် (R) နှင့် SL မှအကွာအဝေး (±2SD) ဆွေမျိုးO အောက်ခြေမှာပြသလျက်ရှိသည်။ C - E , core ကိုအားလုံးကိုအသံသွင်းဖြတ်ပြီးတစ်ဝှမ်း-ဘာသာရပ်ယုတ် DA လွှတ်ပေးရေး (အနက်ရောင်) နှင့် shell ကို (မီးခိုးရောင်) ဆွေမျိုး (ရန် C ) SLO, ( D ) SLPအဆိုပါ TL ကို၎င်း, extension ကိုO4s ကိုအကြာတွင်နှင့် ( E ) TLP, ထိုဆုလာဘ် (R) အစားအစာတောင့်စာနယ်ဇင်းပြီးနောက် 2.5 s ကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ dashed လိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုဒေသများအတွက်ပျမ်းမျှ၏ SEM ပြသထားတယ်။ အောက်ခြေအတန်း ( F - H ) တစ်ဦးချင်းစီအမူအကျင့်ပွဲအတွက်ပျှမ်းမျှအမြင့်ဆုံး DA လွှတ်ပေးရန်ပြသထားတယ်။ *p <0.05 အခြေခံနှိုင်းယှဉ်; †p <0.05 core ကို shell ကိုနှိုင်းယှဉ်။
ကျနော်တို့ကို (ကွင်းဆက်အချိန်ဇယားထဲမှာအပြုအမူဖြစ်ရပ်များအသီးအသီးမှ aligned, အဓိကသို့မဟုတ် shell ကိုဖြစ်စေခုနှစ်တွင်သိမ်းယူအားလုံးအသံသွင်းပျမ်းမျှအားဖြင့်ယင်းတွေ့ရှိချက် quantifiedသဖန်းသီး။2ကို C-H ကို) ။ အဆိုပါ FSCV မှတ်တမ်းတင်အစည်းအဝေးများအတွက်, SL အကြားအချိန်P နှင့် TLO TL အကြားအချိန်ဖြစ်သကဲ့သို့ (4 s) ကို fixed ခဲ့သည်P နှင့် DA ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်လုပ်ငန်းတာဝန်လှုံ့ဆော်မှုများပိုမိုကောင်းမွန် alignment ကိုအဘို့အခွင့်ပြုရန် (2.5 s) ကိုဖြန့်ဝေဆုချ။ ထို့ကြောင့် SL မှ align လုပ်ဖို့O, SLP/ TLOနှင့် TLP/ ဆုလာဘ်အားလုံးအမူအကျင့်အမှတ်အသားများ၏ alignment ကိုခွင့်ပြုခဲ့နှင့်ဤဖြစ်ရပ်များမှအထွတ်အထိပ် DA လွှတ်ပေးရန်ဆွေမျိုးများ၏ဆန်းစစ်ခွင့်ပြု။
(ဖြစ်ရပ်ကအောက်ပါ 300 ms အတွင်းအများဆုံး DA အာရုံစူးစိုက်မှု) အထွတ်အထိပ်နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးက Two-လမ်း ANOVA ဒေသအနှံ့ DA ပြင်းအား (core ကို, အခွံ) နှင့်ဖြစ်ရပ် (အခြေခံ, SLO, SLP, TLO, TLP, ဆုလာဘ်), shell ကိုအဓိကထက်ခြုံငုံပိုပြီး DA ဖြန့်ချိကြောင်းညွှန်ပြ F (1,24) = 13.63, p <0.002 ။ အရေးကြီးသည်မှာ၊ ဒေသ၏ထူးခြားသောအပြန်အလှန်× F (5,120) = 9.88, p <0.0001, အဓိကနှင့် shell ကိုအတွက် DA အချက်ပြကွဲပြားခြားနားသည့်အမူအကျင့်ဖြစ်ရပ်များမှတုန့်ပြန်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်သဖန်းသီး။2F-H ကို) ။ အထူးသ core ကို DA လွှတ်ပေးရန်သိသိသာသာ SL မှာတိုးလာO, အခြေခံမှဆွေမျိုး (p <0.0001) နှင့် SL ၏အချိန်မှာအခြေခံအထက်ကျန်ရစ်၏P (p <0.0001), သိသိသာသာ SL မှာကြောင်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသော်လည်းO (p <0.05) ။ သို့သော်အဓိကအထဲမှာ DA အထွတ်အထိပ်မှာ TL ဖြစ်ရပ် (TL) အတွက်အခြေခံနှင့်မနှိုင်းယှဉ်ပါO အခြေခံ vs, p = 0.59; TLP အခြေခံ vs, p = 1.0), နှင့်ဆုလာဘ်လက်ခံရရှိသည့်အချိန်တွင်အခြေခံကနေအဘယ်သူမျှမခြားနားချက် (p = 1.0) ။
ဆနျ့ကငျြ, အခွံအတွက်အထွတ်အထိပ် DA ပြင်းအားအပေါငျးတို့သဖြစ်ရပ်များအတွက်သိသာထင်ရှားသော DA လွှတ်ပေးရန်ပြသခဲ့သည်။ အားလုံးဖြစ်ရပ်များ, အခြေခံထက် သာ. ကြီးမြတ် DA လွှတ်ပေးရန် BL vs (အားလုံးနှိုင်းယှဉ်နဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည် p <0.0002), ဖြစ်ရပ်များအဘယ်သူအားမျှတစ် ဦး ချင်းစီကတခြား (အားလုံး pairwise SL) ကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောခဲ့ကြသည်သော်လည်းO, SLP, TLO, TLPနှင့်ဆုလာဘ်နှိုင်းယှဉ်, p > 0.96) ။
တိုက်ရိုက် core နဲ့ shell ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း, ငါတို့ဒေသများအကြား DA အချက်ပြအတွက်အရေးကြီးသောကွဲပြားခြားနားမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခြေခံဖြစ်စေစဉ်အတွင်း DA လွှတ်ပေးရေးအတွက်အဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှု (ရှိခဲ့ပေမယ့်p = 1.0) သို့မဟုတ် SL ဖြစ်ရပ်များ (SLO, p = 1.0; SLP, p = 0.22), shell ကို DA နှစ်ဦးစလုံး TL ဖြစ်ရပ်များ (TL အတွက် core နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသိသိသာသာမွငျ့မားခဲ့O, p <0.01; TLP, p <0.001) နှင့်ဆုလာဘ် (p <0.0005; သဖန်းသီး။3D-F ကို).
session ရဲ့အဆုံးနှိုင်းယှဉ်; (ထိုကွင်းဆက်အချိန်ဇယား၏ပထမဦးဆုံး5စမ်းသပ်မှုတွေအစောပိုင်း) (နှောင်းပိုင်းတွင်; နောက်ဆုံး5စမ်းသပ်မှုတွေ) ကို session တစ်ခု၏အစအကြား DA အချက်ပြအတွင်းအပြောင်းအလဲများ။ A တစ် ဦး ချင်းစီ၏ပထမ ဦး ဆုံးစမ်းသပ်မှုငါးခု (အပြာရင့်) နှင့်နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုငါးခု (ခရမ်းရောင်) တို့မှ NAc core တွင်ပျမ်းမျှ DA ပါဝင်မှုနှုန်း။ B အဆိုပါ core ကိုများတွင်အတွင်း-ဘာသာရပ်များအထွတ်အထိပ် DA အချက်ပြသည့် session ရဲ့အစအဦးများနှင့်အဆုံးအကြားမပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့သည်။ C , ဘာသာရပ်တစ်ခုစီ၏ပထမ ဦး ဆုံးစမ်းသပ်မှုငါးခု (အနီရောင်) နှင့်နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုငါးခု (လိမ္မော်ရောင်) မှအလယ်အလတ်မှ NAc shell တွင်ပျမ်းမျှ DA ပါဝင်မှု။ D , Shell က DA-ဘာသာရပ်များအတွင်းသိသိသာသာနှစ်ဦးစလုံး SL မှာလျော့နည်းကျဆင်းပြသP နှင့် TLP တွေကိုနှင့်ဆုလာဘ် (**p <0.01), အ SL မှာကျဆင်းခြင်းသော်လည်းO cue # (နီးပါးသိသိသာသာခဲ့သည်p = 0.073) ။ မှားယွင်းနေသည်အရက်ဆိုင် (အစောပိုင်းနှောင်းပိုင်းတွင် vs) ခြားနားချက်၏အရှေ့တောင်ပြသပါ။
က start နှင့် session ရဲ့အဆုံးအကြား DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီး-တိကျတဲ့အပြောင်းအလဲများ
Next ကိုကျနော်တို့အဲဒီ session (နောက်ဆုံး5စမ်းသပ်မှုတွေ၏အဆုံးနှိုင်းယှဉ်အဲဒီ session (ပထမ5စမ်းသပ်မှုတွေ) ၏အစအဦးမှာအားဖြည့်ကွင်းဆက်အချိန်ဇယားကိုတာဝန်စဉ်အတွင်း core နဲ့ shell ကိုအတွက် DA လွှတ်ပေးရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်; သဖန်းသီး။ 3) ။ ဒါကလျှပ်ကူးပစ္စည်း (အလျှပ်ကူးပစ္စည်းအချိန်ကျော် sensitivity ကိုမဆုံးရှုံးခဲ့ပါကြောင်း, ဆိုလိုသည်မှာ) အဲဒီ session တစ်လျှောက်လုံးတည်ငြိမ်ခဲ့ကြောင်းသေချာစေရန်စမ်းသပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နှင့်လည်း DA ကြောင့်မည်သည့်သက်ရောက်မှုမှဥပမာစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်အတွက်မည်သည့်သိမ်မွေ့သောအပြောင်းအလဲ (ခြေရာခံခြင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့ ဒကွဲပြားခြားနားသောလှုံ့ဆော်မှုများတင်ဆက်မှုကိုအောက်ပါ) အစားအစာစားသုံးပြီးနောက်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုလျော့နည်းသွားသည်။
(အဓိကခုနှစ်တွင်သဖန်းသီး။3A), နှစ်လမ်း ANOVA အဖြစ်အပျက်၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (BL, SL ညွှန်ပြO, SLP, TLO, TLP, Rew; F (5,65) = 35.03, p <0.0001), ဒါပေမယ့် session ကိုအဆင့်၏အဘယ်သူမျှမအကျိုးသက်ရောက်မှု (အစောပိုင်း vs နှောင်းပိုင်းတွင်; F (1,13) = 3.55, p = 0.08), သို့မဟုတ် session ကိုအဆင့်×အဖြစ်အပျက်များအကြားအပြန်အလှန် (F (5,65) = 0.82, p = 0.54) ။ post ကို hoc BL, SL အဘို့အနှောင်းပိုင်းတွင် pairwise နှိုင်းယှဉ် vs အစောပိုင်းအားလုံး: အစောပိုင်းနှောင်းပိုင်းလုပ်ကွက်များအကြားနှိုင်းယှဉ်အဓိကအတွက်အမူအကျင့်ဖြစ်ရပ်များမှအထွတ်အထိပ် DA လွှတ်ပေးရန်ဆွေမျိုးအစနှင့်အ session တစ်ခု (Tukey ၏အဆုံးအကြားတူညီတဲ့ကျန်ရစ်ကြောင်းညွှန်ပြO, SLP, TLO, TLPနှင့်ဆုလာဘ်, p > 0.50; သဖန်းသီး။3B).
သို့သော်လှုံ့ဆော်မှု Task မှ phasic DA လွှတ်ပေးရန်ယေဘုယျအားဖြင့် (ထို shell ကိုအတွက် session တစ်ခုကျော်လျော့နည်းသွားသဖန်းသီး။3C,D), အဖြစ်အပျက်၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ (F (5,55) = 13.52, p <0.0001), session ကိုအဆင့် (F (1,11) = 6.95, p = 0.02), နှင့်ဖြစ်ရပ်နှင့် session တစ်ခုအဆင့်အကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန် (F (5,55) = 3.74, p = 0.006) ။ အဓိက၌ရှိသကဲ့သို့, post ကို hoc စမ်းသပ်မှု BL မှာအဘယ်သူမျှမကွာခြားချက်ညွှန်ပြပေမယ့် SL မှအထွတ်အထိပ် DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှောက်လျော့နည်းP, TLPနှင့်ဆုလာဘ် (Tukey: အားလုံး p <0.0005), SL မှာအရေးပါမှုဆီသို့လမ်းကြောင်းသစ်O cue (p = 0.060), ဒါပေမယ့် TL မှာအဘယ်သူမျှမခြားနားချက်O cue (p = 0.36) ။ ထို့ကြောင့် shell ကိုပြောင်းလဲခြင်း (core မဟုတ်ပါ) သည်အဓိကအားဖြင့်လှုံ့ဆော်သောလုပ်ရပ်များအတွက်သာကန့်သတ်ထားသည်။ DA လွှတ်ပေးမှုတွင်ဤအနှံ့ - session တစ်ခုဆိုင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လျှပ်ကူးပစ္စည်း sensitivity ကိုအတွက်ယေဘူယျအပြောင်းအလဲများမဟုတ်ကြပေမယ့်အစား DA လွှတ်ပေးရန်ပုံစံများအတွက် stimulus- နှင့် shell ကို - တိကျတဲ့အပြောင်းအလဲများထပ်ခါတလဲလဲစမ်းသပ်မှုတွေဖြတ်ပြီးတာဝန်လှုံ့ဆော်မှု၏ပြောင်းလဲအရေးပါမှုနှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်ညွှန်ပြကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းတစ်ခုစီ၏အဆုံးသတ်တွင် (ဥပမာ - ၁၁၄၄ မီလီဂရမ် (သို့) ကြွက်များ၏နေ့စဉ်အစားအစာ - ကန့်သတ်ထားသောပမာဏ၏ ၇.၆%) သည်တိရိစ္ဆာန်များသည်အနည်းဆုံးအနည်းဆုံး ၂၅ လုံးလုံးလုံးစားသုံးခဲ့ကြသောကြောင့်ဤတွေ့ရှိချက်များကအစာကိုပိုမိုစားသုံးမိစေသည် ထိုသတ္တဝါအားလုံးတွင်ပါဝင်သောငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုအခြေအနေကိုအောင်မြင်စွာလျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အခွံပြောင်းလဲမှုတွင်ထင်ရှားသည်။
Cue-evoked core နဲ့ shell ကိုအတွက်လျှပ်စစ်စိတ်ကြွဆေး DA ဒိုင်းနမစ်နှိုင်းယှဉ်
ဤအတွေ့ရှိချက်တစ်ခုအတွက်အသိပေးချက်ကို (core နဲ့ shell ကိုအဓိကနဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုအခွံထဲမှာ DA ပို့ဆောင်ရေးအောက်ပိုင်းသိပ်သည်းဆမှကွဲပြားခြားနားသော DA ရှင်းလင်းရေးဒိုင်းနမစ်ရှိသည်ဖြစ်စေခြင်းငှါဂျုံးစ် et al ။ , 1996; Budygin et al ။ , 2002) ။ ထို့ကွောငျ့ TL နှင့်ဆုလာဘ်ဖြစ်ရပ်များမှာမြင်ကြ shell ကို DA SL ၏ထိုအချိန်ကကြောင့်ကျန်နေတဲ့ DA လွှတ်ပေးရေးသည်ဖြစ်နိုင်Oဒါပေမယ့်အဖြစ်ထိထိရောက်ရောက်အဓိက၌ရှိသကဲ့သို့ Synaptic လျတ်ထံမှရှင်းလင်းခံရဖို့နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးရန်, ကျနော်တို့ (လျှပ်စစ်စိတ်ကြွဆေးဒိုင်းနမစ်အဆိုပါ core နဲ့ shell ကိုအတွက် cue-evoked ဒိုင်းနမစ်ကိုက်ညီခြင်းရှိမရှိကြည့်ရှုရန်ကွင်းဆက်အချိန်ဇယားကိုအသံသွင်းစဉ်ကကဲ့သို့တူညီသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းတည်နေရာမှာလျှပ်စစ်စိတ်ကြွဆေး DA လွှတ်ပေးရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသဖန်းသီး။4A) ။ ကျနော်တို့ shell ကိုအတွက်နှေးကွေးရှင်းလင်းရေး kinetics အချက်ပြနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ရပ် (ဥပမာ, TL အတွက်ကွဲပြားမှုများအတွက်တာဝန်ရှိခဲ့ကြပါလျှင်ကြောင်းခန့်မှန်းO) က core နဲ့ shell ကိုအကြား, ထို့နောက်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာငျဒသေအတွက်လျှပ်စစ်စိတ်ကြွဆေးနှင့် cue-evoked လွှတ်ပေးရန်လွှတ်ပေးရန်နှင့်ရှင်းလင်းရေးနီးပါးတူညီပုံစံများကိုလိုက်နာသင့်ပါတယ်။ ဆနျ့ကငျြ, လျှပ်စစ်စိတ်ကြွဆေးကနေသိသိသာသာသွေဖီသည်ဟုဧရိယာအတွင်းရှိ DA လွှတ်ပေးရန်တစ်ဦးတည်း Synaptic ရှင်းလင်းရေးဒိုင်းနမစ်များကရှင်းပြခဲ့မရနိုငျသောထုံးစံ၌တာဝန်-related ဖြစ်ရပ်များခြေရာခံကြောင်းအကြံပြုလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ NAc core နဲ့ shell ကိုအတွက် cue-evoked DA အချက်ပြသာရှိပြီးပြည်ပမှလျှပ်စစ်စိတ်ကြွဆေး၏နှိုင်းယှဉ်။ A အဆိုပါ SL ဖြစ်စေဖို့ aligned DA ၏, ပျမ်းမျှအာရုံစူးစိုက်မှုO cue သို့မဟုတ် VTA ဖိုင်ဘာစတင်ခြင်း၏လျှပ်စစ်ဆွ။ အဆိုပါ TL စတင်ခြင်း၏အချိန်ကိုက်O Cue နှင့်ဆုလာဘ် SL အောက်ပါသူတို့အားရလဒ်များအဘို့တုံ့ပြန်မှုအဆတစ်ခုအကွာအဝေးအပေါ်ခန့်မှန်းခဲ့သည်O (တြိဂံများကညွှန်ပြတုံ့ပြန်မှုအချိန်ကိုဆိုလိုတာ; width ကို± 95% ယုံကြည်မှုကြားကာလညွှန်ပြ) ။ B ပျမ်းမျှအခြေခံ (BL) DA ပြင်းအား၏နှိုင်းယှဉ် 1 s ကို SL ၏အတွင်း DA အာရုံစူးစိုက်မှုမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိဖို့O သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ဆွ (Stim / SLO), နှင့် TL မှသက်ဆိုင်ရာအချိန်ကာလများအတွက် 95% ယုံကြည်မှုကြားကာလအကွာအဝေးအတွင်းO သို့မဟုတ်ယုဂ်ဆုချ။ C , အထွတ်အထိပ်အာရုံစူးစိုက်မှုမှ latency SL အောက်ပါO သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ဆွ (Peak လတ်) နှင့် core နဲ့ shell ကိုအတွက်ဖြန့်ချိအောက်ပါနောက်ဆက်တွဲယိုယွင်း (ရှင်းလင်းရေး) ။ T က20 နဲ့ T80 ဝက်ဘဝကလက်လှမ်းမမီဝက်အထွတ်အထိပ်အာရုံစူးစိုက်မှုမှအထွတ်အထိပ်အောက်ပါအောင်းနေချိန်ဖြစ်ပါတယ်သော်လည်းထို signal ကို 20% ပျက်စီးသွားရာအနည်းဆုံးကြိမ်နှင့်% ကွာအထွတ်အထိပ်ကနေ 80 အသီးသီးဖြစ်ကြသည်။ *p <0.0001, လျှပ်စစ်ဆွ / SLO အခြေခံနှိုင်းယှဉ်; †p <0.0001, Shell: အခြားဆွသောအမျိုးအစားများထက် cue သာလွန်သည်။ ‡ p <0.0001, Shell: အခြားလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားအားလုံးထက်အထွတ်အထိပ်မှယိုယွင်းပျက်စီးမှုကိုခွင့်ပြုသည်။ အမှားဘားသည် SE ၏ခြားနားချက် (cue vs electric) ကိုပြသည်။
ယေဘုယျအား, ငါတို့ core နဲ့ shell ကိုသိသိသာသာ cue-evoked နှင့်လျှပ်စစ် evoked DA လွှတ်ပေးရေး (အကြားကသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ကွဲပြားကြောင်းတွေ့ရှိရသဖန်းသီး။4B) ။ အလုပ်တခုကိုဖြစ်ရပ်များမှာအထွတ်အထိပ်ပြင်းအားမှာလိုက်ရှာ, အဖြစ်အပျက်× (cue နှိုင်းယှဉ်လျှပ်စစ်) ဆွအမျိုးအစား×ဒေသတစ်ခုအပြန်အလှန်အဖြစ် DA ပြင်းအားအတွက်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှု (အမာခံ / အခွံ) (BL, SL ရှိခဲ့သည်O, TLO, Rew; F (3,174) = 12.31, p <0.0001) ။ အဓိကအားဖြင့် cue-evoked နှင့် electrically stimulated traces များအတွက် DA DA ပြင်းအားသည်တူညီကြသည်။ ဤရွေ့ကားဆွအမျိုးအစားများအကြားမျှစာရင်းအင်းကွဲပြားခြားနားမှု, SL မှာရှိခဲ့သည်O, TLO, ဒါမှမဟုတ်ဆုလာဘ်ယုဂ် (Tukey: အားလုံး p > 0.80) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်အခွံသည် electrically- နှင့် cue-evoked DA release ပုံစံများအကြားကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကိုပြသခဲ့သည်။ အခြေခံသို့မဟုတ် SL မှာအာရုံစူးစိုက်မှုအဘယ်သူမျှမခြားနားချက်ရှိခဲ့သည်သော်လည်းO (Tukey: နှစ်ဦးစလုံး p > 0.98), DA အဆိုပါ TL များအတွက်သိသိသာသာသာ။ ကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်O နှင့်လျှပ်စစ်စိတ်ကြွဆေး (နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ် cued စမ်းသပ်မှုတွေအတွက်ယုဂ်ဆုချ p <0.0001) ။
အလားတူ, synapses ကနေဖြန့်ချိခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲရှင်းလင်းရေးနှုန်း (ကဆင်တူပုံစံပြသသဖန်းသီး။4C) ။ အထွတ်အထိပ်ကနေယိုယွင်းနေတဲ့ function ကိုအဖြစ်ရှင်းလင်းရေးနှုန်းထားများမှာလိုက်ရှာ, ဒေသအကြားသိသိသာသာအပြန်အလှန်ယိုယွင်း parameter သည် (အထွတ်အထိပ်အချိန်, T-×ဆွအမျိုးအစား×ရှိခဲ့20တဝက်-အသက်, T-80; F (3,174) = 80.23, p <0.00001) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအဓိကရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းသည် cue-evoked နှင့် electroked evoked stimulation type များအကြားကွာခြားမှုမရှိပါ။ အမြင့်ဆုံးအထိအဆို့ T 20တဝက်-အသက်, T 80 cue vs လျှပ်စစ် (မသက်ဆိုင်ဆွအမျိုးအစားအားလုံးကစာရင်းအင်းဆင်တူကြ၏အားလုံး p > 0.95) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်အခွံရှိ DA အဆင့်များသည် SL ကို လိုက်၍ အခြေခံအားဖြင့်ယိုယွင်းခြင်းကိုသိသိသာသာနှောင့်နှေးစေသည်O လျှပ်စစ်နှိုးဆွစမ်းသပ်မှုတွေမှဆွေမျိုးတင်ပြချက်များ။ အောင်းနေချိန်မြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိဖို့နေစဉ်နဲ့ T 20 cue-evoked နှင့်လျှပ်စစ်-evoked စိတ်ကြွဆေး (အကြားအလားတူခဲ့ကြသည်p > 0.98), ဝက်ဘဝမှအောင်းနေချိန် (p <0.0001) နှင့် T 80 (p <0.0001) သိသိသာသာလျှပ်စစ်ဆွဆွေမျိုး cued စမ်းသပ်မှုတွေအတွက်နှောင့်နှေးခဲ့သည်။ စုပေါင်းဤတွေ့ရှိချက်များအခွံနှင့် core ကိုအတွက်ရှင်းလင်းရေး kinetics အတွက်အခ်ါကွဲပြားခြားနားမှုအမူအကျင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကာလအတွင်း DA အချက်ပြအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုရှင်းပြဖို့မလုံလောက်ကြောင်းပြသသည်။
မျိုးသုဉ်းခြင်းကာလအတွင်းမတူညီသောခရိုနီများကိုဖိရန်အနှေးကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အစားအစာဆုကိုချန်လှပ်လိုက်သောအခါကြွက်များသည်အစည်းအဝေးများအတွင်းမျိုးသုဉ်းခြင်းအပြုအမူကိုပြသခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်နှင့်အားဖြည့်ထားသောကွင်းဆက်ကဏ္ session အတွင်းရှိ SL နှင့် TL ရှိစာနယ်ဇင်းလွန့်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤ latency shifts များအပေါ် အခြေခံ၍ အပြုအမူဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားသောအဆင့်များကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်းအဆင့်အားအချိန်ကာလအားဖြင့်ပိုမိုအားဖြည့်သော session အတွင်းနှင့်တူညီသောစမ်းသပ်မှုများအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ကြွက်များသည်လီဗာကိုပုံမှန်ထက်ပိုမိုနှေးကွေးစွာ (ဆိုလိုသည်မှာ>2SD) ကိုဖိလိုက်သောအခါ၎င်းသည်တုံ့ပြန်မှုကိုချန်လှပ်သည်အထိပထမနှောင့်နှေးသောတုံ့ပြန်မှုမှကြာမြင့်သောနှောင့်နှေးအဆင့်ဟုခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ ဒီပထမပျက်ကွက်ပြီးနောက်စမ်းသပ်မှုအားလုံးကိုကြွက်ကိုဖိ (နှောင်းပိုင်းစာနယ်ဇင်း) ဒါမှမဟုတ်တုံ့ပြန်မှုချန်လှပ်ခြင်း (နောက်ကျခြင်းမရှိပုံနှိပ်ခြင်း) ကိုအခြေခံပြီးနောက်ကျတဲ့အဆင့်လို့ချေါတယ်။
ပထမဦးစွာကျနော်တို့ (အသီးသီး SL နှင့် TL များအတွက်ပထမဦးဆုံးချန်လှပ်ရုံးတင်စစ်ဆေး (ဆိုလိုသည်မှာနှောင်းပိုင်းအဆင့်မှ shift), ရန်ကြွက်များအဆင့်နှောင့်နှေးစောစောထဲကအောင်းနေချိန်ပြောင်းကုန်ပြီပြမတိုင်မီဖျော်ဖြေစမ်းသပ်မှုတွေ၏နံပါတ်အဖြစ်စမ်းသပ်မှုတွေ၏နံပါတ်အကဲဖြတ်သဖန်းသီး။5A) ။ ကြွက်တွဲ, သူတို့ SL အဘို့ပြုတော်ရှေ့မှာသိသိသာသာ TL အပေါ်တုံ့ပြန်နှေးကွေး t စမ်းသပ်: t (7) = 2.49, p = 0.04, အ TL (ဖြစ်ကောင်းအကျိုးကိုနှင့်အတူ၎င်း၏ချက်ချင်းဆက်ဆံရေးသီလအားဖြင့်) ကို SL ထက်ပျက်ကွက်ဆုချဖို့ပိုအထိခိုက်မခံခဲ့ကြောင်းအကြံပြု။ ဆနျ့ကငျြ, ပထမဦးဆုံးပျက်ကွက်မချခင်စမ်းသပ်မှုတွေ၏နံပါတ် (SL နှင့် TL နှစ်ဦးစလုံးခရိုနီများအတွက်နီးပါးတူညီခဲ့သည်p > 0.9), ဖြစ်ကောင်းချန်လှပ်တုံ့ပြန်မှုဆု၏ခန့်မှန်းချက်တိကျစွာရုံးတင်စစ်ဆေး၏စတင်မှုမှာသုညမှ update လုပ်သောအခါသာထုတ်လွှတ်ခဲ့ညွှန်ပြ။ ဤအချက်နှင့်အညီတိရိစ္ဆာန်များသည် SL ပြုလုပ်သောစမ်းသပ်မှုများကိုတွေ့ရခဲသည်P ဒါပေမယ့်နောက်ဆက်တွဲ TL ချန်လှပ်P တုန့်ပြန် (သာ4/ 140 စုစုပေါင်းနှောင်းပိုင်းတွင်-အဆင့်စမ်းသပ်မှုတွေ; 2.9%), ကြွက်နီးပါးသီးသန့်ကွင်းဆက် sequence ကိုတစျခုလုံးသို့မဟုတ်မမှာအားလုံးဖြစ်စေဖျော်ဖြေကြောင်းအကြံပြု။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ပျက်ကွက်ဖွယ်ရှိပိုပြီး TL ထက် SL မှာရရှိနိုင်သတင်းအချက်အလက်ချိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။
အဓိကသို့မဟုတ် shell ကိုအတွက် FSCV အသံသွင်းနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များအတွက်မျိုးသုဉ်းအပြုအမူ။ A , ကြွက်မတိုင်မီစမ်းသပ်မှုတွေအရေအတွက်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသုဉ်း၏အဆင့် (လက်ဝဲ) နှင့်တုန့်ပြန်ပျက်ကွက် (ညာ) ကို SL (အလင်းမီးခိုးရောင်) နှင့် TL (မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်) နှောင့်နှေးဖို့အစောပိုင်းကနေ shift တုံ့ပြန်အောင်းနေချိန်အတွင်းသိသိသာသာတိုးပြသခဲ့သည်။ အစမ်းချန်လှပ်ခံခဲ့ရသည်မတိုင်မီစမ်းသပ်မှုတွေ၏နံပါတ်ရှာကြံနှင့်တုံ့ပြန်မှုကိုယူပြီးအကြားတူညီခဲ့သော်လည်း။ ကြွက်က, SL ထက်သိသိသာသာနည်းပါးလာစမ်းသပ်မှုတွေအတွက် TL များအတွက်အောင်းနေချိန်ပြောင်းကုန်ပြီပြသ *p <0.05 SL TL နှိုင်းယှဉ်။ B မျိုးသုဉ်း၏အဆင့်ကိုဖြတ်ပြီး, တုံ့ပြန်မှုဟာ SL အပေါ်တုံ့ပြန်ရန်အောင်းနေချိန် (လက်ဝဲ) နှင့် TL (ညာ) ။ တုန့်ပြန်အောင်းနေချိန်လုပ်ကွက်ကိုဖြတ်ပြီးတိုးတက်သဖြင့်, SL ပုံနှိပျများအတွက်နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်နှောင်းပိုင်းတွင်မျိုးသုဉ်းလုပ်ကွက်များတွင်သိသိသာသာရှည်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ TL အပေါ် Press တစ်ခုချင်းစီကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွင်း SL အပေါ်တွေထက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပိုမိုမြန်ဆန်ခဲ့ကြသည်။ *p <0.05, **p <0.01 vs အစောပိုင်း Ext ။
Next ကိုကျနော်တို့ SL များအတွက်ပျမ်းမျှအား latency လေ့လာP နှင့် TLP တစ်ဦးချင်းစီအဆင့်အထက်ပါသတ်မှတ်ချက်အပေါ်အခြေခံပါတယ်။ ANOVA task ကို (ကွင်းဆက်စောစောသုဉ်း, မျိုးသုဉ်းနှောင့်နှေးနှောင်းပိုင်းသတင်းမီဒီယာ) ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်စဉ်အတွင်းကွဲပြားခြားနားသောခရိုနီ (SL, TL) အပေါ်တုန့်ပြန်အောင်းနေချိန်နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးက Two-လမ်းထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံလီဗာ၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည် (F (1,4) = 45.7, p အဆိုပါ SL ထက် TL အပေါ်သိသိသာသာပိုပြီးလျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်မှု (ကြောင့်ခဲ့သည့် = 0.003),သဖန်းသီး။5B(ပုံမှန်အားဖြည့်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်မျိုးသုဉ်းအဆင့်သိသိသာသာအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ), တသမတ်တည်းF (3,12) = 14.5, p <0.001) ။ အဆိုပါ SL, SL သည်P အစောပိုင်းသုဉ်းနေစဉ်အတွင်းတုံ့ပြန်မှုဟာအားဖြည့်ကွင်းဆက် session တစ်ခု (Tukey စဉ်အတွင်းသူတို့အားအလားတူခဲ့ကြသည်: p = 1.0), ဒါပေမဲ့သိသိသာသာ (နှောင့်နှေးနေဖြင့်နှေးကွေးp အစောပိုင်း) နှင့်နှောင်းပိုင်းတွင်စာနယ်ဇင်း vs = 0.02 (p = အစောပိုင်း) အဆင့် vs 0.003 ။ သို့သော် SL အပေါ်စာနယ်ဇင်း latency (နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်နှောင်းပိုင်းတွင်အဆင့်အကြားအလားတူခဲ့ကြသည်p = 0.89) ။ TL ပုံနှိပျအဘို့, တုန့်ပြန်အောင်းနေချိန်ဆိုင်းဟာနှောင်းပိုင်းအဆင့်အစောပိုင်းအဆင့် (ထက်သိသိသာသာနှေးကွေးဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူပိုမိုသိမ်မွေ့ခဲ့ကြသည်p = 0.04) ။ သို့သော်တစ်ဦး linear ဆနျ့ကငျြဘ (အ TL အောင်းနေချိန်ပြောင်းကုန်ပြီအတွက်ကှဲလှဲ၏အကြီးမြတ်ဆုံးအချိုးအစားအဘို့မှတ်F (1,4) = 11.08, p = 0.03; အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကှဲလှဲ၏ 86%), အ SL ဘို့သော်လည်း, ထိုကွင်းဆက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်စောစောနှောင့်နှေးနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်နှောင်းပိုင်းကအဆင့်တစ်ဆနျ့ကငျြဘ (အကြိုးသကျရောကှဲလှဲ၏အကြီးမြတ်ဆုံးအချိုးအစားအဘို့မှတ်F (1,4) = 15.42, p = 0.02; အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကှဲလှဲ၏ 97%) ။
မျိုးသုဉ်း: ချန်လှပ်ရလဒ်ကို differential core နဲ့ shell ကို DA အချက်ပြကြီးထွားများပြားစေ
ကြွက်မျိုးသုဉ်း၏အပြုအမူသတ်မှတ်အဆင့်တဆင့်တိုးတက်အဖြစ် NAc အတွက် event-related DA အချက်ပြအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားလေသည်။ DA encoding က core နဲ့ shell ကိုအကြားသိသိသာသာမတူညီသုဉ်း (ကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့သောအတွက်ထုံးစံသဖန်းသီး။ 6).
အဓိကအတွက် DA လွှတ်ပေးရေး ( A - C ) နှင့် shell ကို ( D - F ) မျိုးသုဉ်းနေစဉ်အတွင်း။ A , Alignment ကတော့ SL မှO အဓိကအတွက်ကြားမှာသုဉ်းစမ်းသပ်မှုတွေဆုခခြံကွင်းဆက်အစည်းအဝေးများမှဆွေမျိုး (အပြာလိုင်း) (အနက်ရောင်လိုင်း) ကျော် cue မှ core ကို DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ကျဆင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ အဆိုပါ TL မှ aligned ဟာအားဖြည့်ကွင်းဆက်အချိန်ဇယား (အနက်ရောင်) နှင့်အစောပိုင်းသုဉ်းနေစဉ်အတွင်းအော်ပရေတာတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဆုလာဘ်မှ BvCore DA လွှတ်ပေးရေး (အပြာ)P အဖြစ်အပျက်။ မီးခိုးရောင် bar ဟာအခြေခံကာလအတွင်း DA အများဆုံးနှင့်အနည်းဆုံးပြင်းအား၏အကွာအဝေးပြသထားတယ်။ C အဆိုပါ SL ရန်, Peak DA ဆွေမျိုးP, TLP, နှင့်အားဖြည့်အချိန်ဇယားကိုစောစောသုဉ်းအတွက်ဆုချ။ D , Alignment ကတော့ SL မှO shell ကိုအတွက် (အနီလိုင်း) ဆုခခြံကွင်းဆက်အစည်းအဝေးများ (အနက်ရောင်လိုင်း) မှဆွေမျိုးကြားမှာသုဉ်းစမ်းသပ်မှုတွေကျော် cue မှ phasic DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်ပိုပြီး discrete လျှောက်လျော့နည်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ E , DA အချက်ပြသည့် TL မှ alignedP အစောပိုင်းသုဉ်း (အနီ) နှင့်အားဖြည့်ကွင်းဆက်အချိန်ဇယား (အနက်ရောင်) တွင် shell ကိုပါ။ F , အခွံထဲမှာ Peak DA SL မှာမပြောင်းလဲခဲ့Pဒါပေမယ့် TL မှာသိသိသာသာလျှောက်လျော့နည်းပြသP နှင့်ဆုချ။ *p <0.05, **p <0.01, အစောပိုင်းမျိုးသုဉ်းနှိုင်းယှဉ်ကွင်းဆက်; †p <0.05, အခြေခံထက်လျော့နည်းပျက်ကွက်။
ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးအမျိုးသုဉ်းနေစဉ်အတွင်းအဓိကအတွက် DA အချက်ပြဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ SL မှဆွေမျိုးO, DA သိသိသာသာများနှင့် linearly, အဆုခခြံကွင်းဆက် session ကိုမှမျိုးသုဉ်းဆွေမျိုးများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ကိုဖြတ်ပြီး (အပြန်အလှန်လျော့နည်းသွား: cue ×အဆင့်; SLO အခြေခံ vs; F (4,157) = 33.19, p <0.0001; သဖန်းသီး။6အေ Post ကို hoc pairwise နှိုင်းယှဉ်သည့် SL မှအထွတ်အထိပ် DA ပြသO : လျှင်မြန်စွာကွင်းဆက်များနှင့်အစောပိုင်းသုဉ်းအဆင့် (Tukey အကြားလျော့နည်းသွား p <0.0001) နှင့်ထပ်မံစောစီးစွာမျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့်နှောင်းပိုင်းမျိုးသုဉ်းခြင်းအကြား (p <0.0001) ။ သို့သော်နှောင့်နှေးမျိုးသုဉ်းနေစဉ်အတွင်း DA နှောင်းပိုင်းစာနယ်ဇင်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောမဟုတ်ခဲ့ (p = 0.64) နှင့်အထွတ်အထိပ် DA ကြွက်နှောင်းပိုင်းတွင်အဘယ်သူမျှမစာနယ်ဇင်း vs တစ်တုံ့ပြန်မှုသို့မဟုတ်မ (နှောင်းပိုင်းကစာနယ်ဇင်းကိုဖန်ဆင်းရှိမရှိအပေါ်အခြေခံပြီးနှောင်းပိုင်းအဆင့်ကွာခြားခဲ့ပါဘူး, p = 0.99) ။ အဆိုပါ SL စဉ်အတွင်းထို့ပြင် DA လွှတ်ပေးရန်O (ထိုကွင်းဆက်အတွက်အခြေခံထက်သိသိသာသာကြီးp <0.0001) အစောပိုင်းမျိုးသုဉ်းခြင်း (p <0.0001) နှင့်မျိုးသုဉ်းမှုနှောင့်နှေးခြင်း (p <0.001) အဆင့်, ဒါပေမယ့်မနှောင်းပိုင်းစာနယ်ဇင်းအတွက်သို့မဟုတ်နှောင်းပိုင်းတွင်မျှစာနယ်ဇင်းအဆင့် (နှစ် ဦး စလုံး p > 0.5) ။ ဤရွေ့ကားတွဲဖက်တွေ့ရှိချက်သိသိသာသာအနုတ်လက္ခဏာ linear လမ်းကြောင်းသစ်ထောက်ခံ (F (1,157) = 94.77, p အကျိုးသက်ရောက်မှုကှဲလှဲ၏အများစု (0.0001%) အဘို့မှတ်သော <71) ။
ထို့နောက်ဦးနှောက်ထဲမှာ PE အချက်ပြမှုများ၏တဦးတည်းလက်ခဏာအနေနဲ့ချန်လှပ်မျှော်လင့်ထားသည့်ဆုလာဘ်၏အချိန်မှာအနုတ်လက္ခဏာခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ် (Schultz et al ။ , 1997) ။ ကျနော်တို့ဘာသာရပ်အကျိုးကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏မည်ဖြစ်ကြောင်းအပြည့်အဝမျှော်လင့်ခဲ့သည့်အခါဤအအချက်ပြမှုများအစောပိုင်းသုဉ်းအတွက်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထား။ (အဓိကခုနှစ်တွင်သဖန်းသီး။6B), နှစ်လမ်း ANOVA အစောပိုင်းသုဉ်း vs အဆင့် (ကွင်းဆက်×အဖြစ်အပျက်၏သိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန်ညွှန်ပြ; F (3,57) = 3.24, p = 0.029) ။ အထူးသရှေ့ SL မှအထွတ်အထိပ် DA လွှတ်ပေးရန်ဆွေမျိုးပေမယ့်P သိသိသာသာ Tukey (ယင်းအားဖြည့်ကွင်းဆက် session ကိုစောစောသုဉ်းဆွေမျိုးထဲမှာလျှော့ချခဲ့သည်: p = 0.019), အ TL မှ DA လွှတ်ပေးရန်P (ထိခိုက်ခဲ့p = 0.41) ။ ပြင်းထန်စွာ, core ကို DA (မျိုးသုဉ်းနေစဉ်အတွင်းတစ်အနုတ်လက္ခဏာခန့်မှန်းအမှား၏သက်သေအထောက်အထားများပြသသဖန်းသီး။6B) ကိုမျှော်လင့်ထားပေမယ့်ချန်လှပ်ဆုလာဘ်၏အချိန်ကာလအတွင်းထိုကဲ့သို့သောကြောင်း DA လွှတ်ပေးရေးကို (အားဖြည့် session တစ်ခုအတွင်းမှာထက်သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့p = 0.003) ။ အမှန်မှာထိုဆုလာဘ်မှအထွတ်အထိပ် DA လွှတ်ပေးရန်သော်လည်းယင်းအားဖြည့် Chain session တစ်ခုအတွင်းမှာအခြေခံကနေမျှကွဲပြားခြားနားသောခဲ့တာ (p = 0.99), ကဆုလာဘ်ပျက်ကွက် (ကာလအတွင်းအခြေခံထက်သိသိသာသာလျော့နည်းစေရန်ပြောင်းရွှေ့p = 0.03) ။ ထို့ကြောင့်အစောပိုင်းသုဉ်းနေစဉ်အတွင်းအဓိကအတွက် DA အချက်ပြမှုများပျက်ကွက်ဆုချမှတစ်ဦး TL cue ရန်မပြောင်းလဲမှုကိုဆွေမျိုးများနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောခန့်မှန်းအမှားကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် SL လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လုပ်ရပ်များမှလွှတ်ပေးရန်အတွက်ပြောင်းလဲနေသောဆိုင်းနှစ်ခုလုံးကိုပြသ။
အဆိုပါ shell ကိုပု SL မှ DA လွှတ်ပေးရန်ဆွေမျိုးတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောပုံစံပြသO cue (သဖန်းသီး။6D) ။ အဆိုပါ SL ဖို့ဒီမှာဘာသာရပ်-ပျမ်းမျှ cue-evoked DAO သည် dynamically အဆင့်, (အပြန်အလှန်ဖြတ်ပြီးပြောင်းလဲသွားတယ်: cue ×အဆင့်; F (2,24) = 7.95, p <0.0005), ဒါပေမယ့် core နဲ့မတူဘဲ, shell ကို DA ကွင်းဆက်အဆင့်နှင့်အစောပိုင်းမျိုးသုဉ်းအကြားမပြောင်းခဲ့ပါဘူး, (p = 0.74), ဒါပေမယ့် DA အဆိုပါ SL မှအချက်ပြO သိသိသာသာအားဖြည့်ကွင်းဆက်အဆင့်နှစ်ဦးစလုံးမှဆွေမျိုးနှောင့်နှေးသုဉ်းအဆင့် (စဉ်အတွင်းလျော့နည်းသွားခဲ့သည်p = 0.041) နှင့်အစောပိုင်းသုဉ်းအဆင့် (p = 0.02), ကြွက်များ၏အပြုအမူအတွက်လှုံ့ဆျောမှုပြောင်းလဲမှုနှင့်တိုက်ဆိုင် (သဖန်းသီး။ 5) ။ DA အချက်ပြသိသိသာသာ (နှောင့်နှေးအဆင့်နှောင်းပိုင်းအဆင့်များအကြားနောက်တဖန်နှောင်းပိုင်းတွင်စာနယ်ဇင်းလျော့နည်းသွား, p = 0.03; နှောင်းပိုင်းတွင်အဘယ်သူမျှမစာနယ်ဇင်း, p = 0.004), ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမစာနယ်ဇင်းနှိုင်းယှဉ်နှောင်းပိုင်းအဆင့် (စာနယ်ဇင်းအကြား DA အဆင့်ဆင့်အတွက်ခြားနားခြင်းအလျှင်းမရှိခဲ့ p = 0.43) ။ အဆိုပါ SL စဉ်အတွင်းအဓိက, DA လွှတ်ပေးရန်ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့O သည်ကွင်းဆက်ကာလအတွင်းသိသိသာသာအခြေခံအထက်တွင်အစောပိုင်းသုဉ်းခဲ့သုဉ်းအဆင့် (Tukey နှောင့်နှေး: အားလုံး p <0.001), ဒါပေမယ့်နှောင်းပိုင်းအဆင့်မအခြေခံနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အခွံအတွင်းရှိတူညီသော cue များအတွက် DA လွှတ်ပေးမှုပုံစံများအစားမျိုးသုဉ်းအဆင့်အကြားစိတ်ခွန်အားနိုးအခြေအနေအပြောင်းအလဲများကိုခြေရာခံနေစဉ်ထို့ကြောင့်, အဓိက DA လွှတ်ပေးရန်လျှင်မြန်စွာနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အများဆုံးကြိုတင်ခန့်မှန်း cue များအတွက်ခန့်မှန်းပြောင်းလဲမှုများကိုခြေရာခံ။
နှိပ်ပြီးဆုလာဘ်အချက်ပြမှာလိုက်ရှာ, shell ကို DA လွှတ်ပေးရေး (အဓိကအတွက်ပုံစံကနေကွဲပြားသဖန်းသီး။6E,F) ။ ANOVA လှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစား (BL, SL နေဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီစမ်းသပ်မှုတွေအပေါ် DA ဆန်းစစ်တစ်ဦးက Two-လမ်းP, TLP, ဆုလာဘ်) နှင့်မျိုးသုဉ်းအဆင့် (ကွင်းဆက်စောစောသုဉ်း) (မျိုးသုဉ်း×လှုံ့ဆော်မှုများအကြားသိသိသာသာအပြန်အလှန်တွေ့ရှိခဲ့F (3,108) = 11.5, p <0.0001; သဖန်းသီး။6D) ။ အဓိကမတူဘဲ, ထို SL မှအထွတ်အထိပ် shell ကို DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်ခြားနားခြင်းအလျှင်းမရှိခဲ့P အစောပိုင်းသုဉ်းအတွက် (p = 0.44) ။ အဲဒီအစားမျိုးသုဉ်းသည့် TL နှစ်ဦးစလုံးမှ DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းခြင်းသွေးဆောင်P (p = 0.01) နှင့်လက်ခံရရှိဆုချဖို့ဆုလာဘ်ပျက်ကွက်ဆွေမျိုးများ၏အချိန်က (p <0.0001) အားဖြည့်ချည်နှောင် Chain အချိန်ဇယားကာလအတွင်းလိုက်ဖက်အချိန်ဆွေမျိုး။ ဆုလာဘ်ချည်နှောင်ခြင်းအစည်းအဝေးကာလအတွင်း DA သည်အခြေခံအားဖြင့်သိသိသာသာမြင့်တက်ခဲ့သည် (p <0.0001), ဒါပေမယ့်ဆုကိုချန်လှပ်စဉ်ကာလအတွင်း DA ထက်ကိန်းဂဏန်းများထက်သာ။ ကြီးမြတ်ပေမယ့်အခြေခံကနေကိန်းဂဏန်းများကွဲပြားမှု (p = 0.07) ။ ထို့ကြောင့်အဓိကနှင့်မတူဘဲ, ငါတို့အစောပိုင်းသုဉ်းခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများများအတွက်ကန့်သတ်သက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်အစား TL (သို့သော်မပေး SL) စာနယ်ဇင်းအဖြစ်အားဖြည့်အချိန်ဇယားစဉ်အတွင်းမြင်ကြအကျိုးကိုမှာ DA လွှတ်ရာဖျက်သိမ်းရေးမှ DA လွှတ်ပေးရန်ဆွေမျိုးတစ်ဦးကျဆင်းခြင်း။
Phasic DA လွှတ်ပေးရန်ပုံစံများသိသိသာသာ DA function ကို၏ခြားနားသီအိုရီနှင့်ကိုက်ညီနေတဲ့ထုံးစံ၌ NAc ငျဒသေအကြားကွဲပြားကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုခြေရာခံ။ ရေတွင်းတစ်တွင်းသင်ယူကွင်းဆက်အချိန်ဇယားကိုတာဝန်မှာ NAc core ကိုအတွက် DA ရွေးချယ်အရှိဆုံးကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် cue မှာအထွတ်အထိပ်သို့နှင့် linearly သုဉ်းနေစဉ်အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးနှင့်အမှားအယွင်းများအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုခြေရာခံ။ ဆနျ့ကငျြ task ကိုဆုခခြံခဲ့ရသောအခါ, NAc shell ကိုအတွက် phasic DA လွှတ်ပေးရန်အားလုံးအဓိကလှုံ့ဆော်မှုခြေရာခံများနှင့် session တစ်ခုအတွင်းမှာနှင့်မျိုးသုဉ်းနေစဉ်အတွင်းနှစ်ဦးစလုံးလှုံ့ဆျောမှုအတွက်ဆိုင်းနှင့်အတူတသမတ်တည်းအချက်ပြပြောင်းလဲမှုများပြသ။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကျနော်တို့ကဤ DA အချက်ပြမှုများသင်ယူမှုနှင့်အရေးယူလမ်းပြကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးနှစ်ဦးစလုံးသတင်းအချက်အလက်ခွင့်အပြုအမူစဉ်အတွင်းတစ်ပြိုင်နက်တိရစ္ဆာန်မှရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းတင်ပြသည်။
core DA လွှတ်ပေးရန်ခန့်မှန်းအမှားခြေရာခံ
အဓိကမှာတော့ DA phasically SL cue တင်ဆက်မှု၏ထိုအချိန်ကတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ယခင်တွေ့ရှိချက်အလားတူအပြည့်အဝခန့်မှန်းအကြာတွင်ဖြစ်ရပ်များ (ဥပမာ, TL, ဆုလာဘ်), (များအတွက်အခြေခံမှငြင်းဆိုခဲ့သည်Roitman et al ။ , 2004; Cacciapaglia et al ။ , 2012) ။ လှုပ်ရှားမှု၏ဤပုံစံကိုလိုက်နာကြောင်းတိကျစွာဟောကိန်းထုတ်ဖြစ်ရပ်များအနည်းငယ်မျှသာ DA လွှတ်ပေးရေး (ဆိုလိုသည်မှာ, ခန့်မှန်းအမှား) ထုတ်ယူသင့်ပါတယ်သော်လည်းအကျယ်ချဲ့ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကို, အမြင့်ဆုံး DA လွှတ်ပေးရေး (ဆိုလိုသည်မှာ, ခန့်မှန်း) ထုတ်ယူသင့်ကြောင်းအရာပြည်နယ်, အမှားခန့်မှန်းမော်ဒယ်များနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ TL နှင့်ဆုလာဘ်ဟာ SL နေဖြင့်တိကျစွာဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ကြသည်အဖြစ်ထို့ကြောင့်သူတို့က (၎င်းတို့၏ပေးပို့မှာအနည်းငယ်သာအမှားထုတ်လုပ်ပြီးနှင့်အနည်းငယ်သာအမှား-related DA လွှတ်ပေးရန် evokedSchultz et al ။ , 1997; Schultz နှင့် Dickinson, 2000).
ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်အခြားသူများ (အဓိကအတွက် DA အချက်ပြမှုများကိုခန့်မှန်းတန်ဖိုးကွဲပြားမှုမှအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းပြသပြီ, reinforcement ဖို့အန္တရာယ် preference ကိုနှင့်နှောင့်နှေးတူသောပုဂ္ဂလဒိဋ္အချက်များအားဖြင့် modulated နေကြတယ်နေ့ et al ။ , 2010; Gan et al ။ , 2010; Sugam et al ။ , 2012; Saddoris et al ။ , 2013, 2015) ။ သာဓကအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အန္တရာယ်များသောကြွက်များတွင်ကြက်များတွင် DDA သည်ကြွက်၏ရွေးချယ်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အချက်များဖြင့်ခုန်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုချန်လှပ်လိုက်သောအခါနိမ့်ကျသောခန့်မှန်းချက်အမှားကိုဖော်ပြသည်။Sugam et al ။ , 2012) ။ အလားတူပင်ဒီမှာ core ကို DA ခန့်မှန်းရလဒ်၏တန်ဖိုးနှစ်ခုလုံးကိုခြေရာခံနှင့်သည် dynamically သုဉ်းစဉ်အတွင်း updated ဟောကိန်းထုတ် cue တန်ဖိုးကိုအပေါ်အခြေခံပြီးအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားလေသည်။ အဆိုပါ SL မှအမှန်စင်စစ် DA လွှတ်ပေးရန်O ကြွက်မသက်ဆိုင်တဲ့တုံ့ပြန်မှု DA မဟုတ်ဘဲစာနယ်ဇင်းဖို့လှုံ့ဆျောမှုထက်တုံ့ပြန်၏မျှော်လင့်တန်ဖိုးကိုအချက်ပြအကြံပြုခြင်း, ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်ဖြစ်စေမ၏, မျိုးသုဉ်းနေစဉ်အတွင်းတုံ့ပြန်မှုချန်လှပ်စတင်ခဲ့ပြီးအချိန်မှာအခြေခံကနေမတူညီတဲ့အဘယ်သူမျှမဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင်အစောပိုင်းသုဉ်းအတွက်အနုတ်လက္ခဏာခန့်မှန်းအမှားအချက်ပြနှင့်အတူတသမတ်တည်း, DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်ခိုင်မာတဲ့ဖြင့်ခေတ္တရူးနှမ်းပျက်ကွက်ဆုချ။
Shell က DA motivationally အဓိကလှုံ့ဆော်မှုခြေရာခံ
shell ကိုအတွက် DA လွှတ်ပေးရန်သမ္မာသတိအားလုံးအဓိကလှုံ့ဆော်မှု (SL ခြေရာခံO, TLO, R ကို) ။ ဤရွေ့ကားပုံစံများနှေးကွေး reuptake kinetics အားဖြင့်ရှင်းပြခြင်းနှင့်အစားဆက်ပြောပါတယ်ဖြစ်ရပ်များ (များ၏ Real-time encoding ကရောင်ပြန်ဟပ်မှပေါ်လာမရနိုင်ခြင်းပန် et al ။ , 2005) နှင့်ဝယ်ယူမက်လုံးပေး salience (Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998; Berridge, 2012; Wassum et al ။ , 2012) ။ ထို့ကြောင့် DA လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ရပ်များ (အဓိကအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုနှင့်ဆုလာဘ် shell ကိုရှိပေမယ့်မှသာကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုနှစ်ဦးစလုံး encodedCacciapaglia et al ။ , 2012).
ကျနော်တို့ shell ကို DA အချက်ပြ၏ဤစိတ်ခွန်အားနိုးအစိတ်အပိုင်းဘို့သက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာလှုံ့ဆော်မှုဖို့ shell ကိုအတွက်အချက်ပြ DA အဓိကထဲမှာမတွေ့မမြင်ခဲ့သောအစအဦးများနှင့်အစည်းအဝေးများ၏အဆုံးအကြားယုတ်လျော့ခဲ့သည်။ တဦးတည်းရှင်းပြချက် session ရဲ့အဆုံး၌ကြွက်များ (အဓိပ်ပါယျအားဖွငျ့သူတို့ session တစ်ခုစတင်ခြင်းမှာထက်ပိုအစားအစာကိုစားဖူး) ရိုးရိုးပိုပြီး sated ရှိ. , ကဲ့သို့သောအစားအစာ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုတိရစ္ဆာန်၏လျော့နည်းသွားစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်ထင်ဟပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ ။ ဆနျ့ကငျြဘမှာတွေကိုနေဆဲတိကျစွာ sucrose တောင့်များ၏ပို့ဆောင်မှုဟောကိန်းထုတ်, ဒါကြောင့်အမာခံအတွက် PE-type အမျိုးအစား encoding ကအတော်လေးလျော့နည်းဒီစိတ်ခွန်အားနိုးပြောင်းကုန်ပြီကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်မှာသုဉ်းနေစဉ်အတွင်း, အခွံထဲမှာ DA လွှတ်ပေးရေး SL မှO ကြွက်များသည်လုပ်ငန်းကိုတူညီသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့် (တုန့်ပြန်မှုနှေးကွေးခြင်းနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုရှိခြင်းအရ) တွင်လုပ်ဆောင်နေစဉ်တည်ငြိမ်မှုရှိသော်လည်းကြွက်များ၏လှုံ့ဆော်မှု (ဆိုလိုသည်မှာတုန့်ပြန်မှုနှေးကွေးမှု) မျိုးသုဉ်းစဉ်အတွင်းသိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်။ ဆနျ့ကငျြ, ကျနော်တို့ TL လှုံ့ဆော်မှုစဉ်အတွင်း phasic DA လွှတ်ပေးရန်လျင်မြန်စွာလျော့နည်းလာကိုမြင်တော်မူ၏။ IS မော်ဒယ်များကမသေချာမရေရာမှုများကိုလျှော့ချသည့်အချက်များကပိုမိုလှုံ့ဆော်မှုနှင့်မက်လုံးများလွန်းအားကြီးလာစေသင့်ကြောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်Zhang က et al ။ , 2009; Smith က et al ။ , 2011), အရာကဒီမှာကအံ့ဆဲဆဲဆုလာဘ်ပေးပို့၏အကျယ်ချဲ့ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်သကဲ့သို့, TL ဆီသို့ biased ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်စိတ်ကြွဆေး၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc shell ကိုတာဟာရွေးချယ် (ကညျြနှော pavlovian တာဝန်အတွက်ဆုလာဘ်များဖြန့်ဝေဖို့အများဆုံး Proximity တွေကိုများ၏ encoding က potentiate ပေမယ် sequence ကိုအတွင်းပထမဆုံး cue အပေါ်လျော့နည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိSmith က et al ။ , 2011) ။ ထို့ကြောင့် TL ၏ DA encoding ကမျိုးသုဉ်းအတွက်ဆုလာဘ်ပေးပို့များ၏ခန့်မှန်းဆုံးရှုံးမှုအထူးသဖြင့်အထိခိုက်မခံခဲ့သည်။ အံ့သြစရာဆုလာဘ်ပျက်ကွက် shell ကို DA အဓိကထက်အပျက်သဘောဆောင်သောခန့်မှန်းအမှားဝှက်ဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိခဲ့ကြောင်းအကြံပြု, အခြေခံအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါဘူး။ စုပေါင်းခြင်း, NAc shell ကိုအတွင်းအချက်ပြ၏ဤပုံစံအဓိကအနေဖြင့်အဖြစ်ထင်ရှားစွာကွဲပြားခြားနားကြောင်း, IS-type အမျိုးအစား encoding ကရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များဖြစ်ပါတယ်။
ထောက်ခံမှုမှာ NAc shell ကို motivationally မောင်းနှင်အပြုအမူတွေအမျိုးမျိုးအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန်ဆား-ဆုံးရှုံးလျှင်တစ်ဦးငန်ဖြေရှင်းချက်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆန္ဒရှိသည်အဘယ်မှာရှိဥပမာဆားအစာစားချင်စိတ်, အဘို့, အကြိုးရှိနိုင်ပါသည်။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးမှာခန့်မှန်းရလဒ် (ဆား) အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ရလဒ်ကိုရယူဖို့လှုံ့ဆျောမှု (သာမန်နဲ့ဆား-ဆုံးရှုံးတိရိစ္ဆာန်များအကြားမတူTindell et al ။ , 2009) ။ core ကိုအာရုံခံပြည်နယ်-based ကွဲပြားခြားနားမှု (ဖော်ပြရန်ပျက်ကွက်နေစဉ်ငန်ဖြေရှင်းချက်များအတွက် NAc အာရုံကြော encoding က, ဆားလှုံ့ဆျောမှု၏ဒီဂရီအပေါ်အခြေခံပြီး shell ကိုအတွက် modulated ဖြစ်ပါတယ်Loriaux et al ။ , 2011) ။ ကိုကင်းနှင့်အတူနာတာရှည် pretransfer အတွေ့အကြုံကိုမအဖြစ်အလားတူပင်စိတ်ကြွဆေး၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc shell ကို microinfusions ပြင်းပြင်းထန်ထန် (pavlovian-to-ဆာလွှဲပြောင်း (သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့) စဉ်အတွင်းတစ် cue ၏ရှေ့တော်၌အနှိပ်လီဗာ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသန်စွမ်း potentiatesWyvell နှင့် Berridge, 2000; Saddoris et al ။ , 2011; LeBlanc et al ။ , 2013) ။ အမှန်မှာသင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့အပြုအမူ potentiates ကြောင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းနှင့်အတူအတွေ့အကြုံကိုလည်းဦးစား (NAc အဓိကရန်အာရုံကြော encoding ကဆွေမျိုး Shell တိုးပွါးSaddoris et al ။ , 2011).
shell ကိုနှင့်အမာခံအတွက် IS နှင့် PE ၏ဤပုံစံအစာစားချင်စိတ်များနှင့်ဆန္ဒရှိအခြေအနေများနှစ်ဦးစလုံးကိုခြေရာခံရန်ပုံပေါ်ပါတယ်။ pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်, အဓိကဆန္ဒရှိတွေကိုများအတွက် NAc shell ကိုအတွက် phasic DA တိုးအတွက် core ကို DA လွှတ်ပေးရန်အနှုတ်ရလဒ်ကို (၏ PE-type အမျိုးအစားခန့်မှန်း၏ညွှန်ပြလွှတ်ပေးရန်အတွက်လျှောက်လျော့နည်းခြင်းနှင့်ခေတ္တမွငျလြှငျသော်လည်းBadrinarayan et al ။ , 2012) ။ core ကို DA လွှတ်ပေးရန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရလဒ်ကိုတန်ဖိုးခန့်မှန်းဖို့ coupled ဖြစ်နေဆဲသော်လည်းထို့ကြောင့်ပင်အနှုတ်လက္ခဏာ (သို့သော်အဓိက) ဖြစ်ရပ်များ, shell ကိုအတွင်းကာ IS-type အမျိုးအစားမော်ဒယ်နှင့်အတူအဘို့မှတ်နိုင်ပါသည်။
တဦးတည်းအတွက်အသိပေးချက်, pavlovian အေးစက်အတွက်ဦးစားချက်ချင်းစားနပ်ရိက္ခာခွက်ကို ( "ရည်မှန်းချက်ကိုခြေရာခံ" ကိုသွားသောသူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ် NAc core ကိုအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကို ( "နိမိတ်လက္ခဏာကိုခြေရာခံ") ပြပွဲတိုးမြှင် DA လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ကြောင်းတိရစ္ဆာန်များဖြစ်၏ Flagel et al ။ , 2011) ။ ဤသည်တိုးပွားလာသောနိမိတျလက်ခဏာ-ခြေရာခံခြင်း (ထို cue တစ်ဦးအဓိကတစ်ဦးစိတ်ခွန်အားနိုး "သံလိုက်" အဖြစ်သရုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းလှုံ့ဆော်မှုနှင့်သဘောတူချက်ဖြစ်လာသည်အဖြစ် core ကိုအလားတူတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူ IS supporting အဖြစ်ဖော်ပြနေသည်Aragona et al ။ , 2009; Peciñaနှင့် Berridge, 2013; Wassum et al ။ , 2013; Ostlund et al ။ , 2014) ။ ဒါကအဓိကရန် biased PE ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ကျတဲ့နေရာနဲ့တခြားစီဖြစ်နေပါတယ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့် shell ကိုမှ IS ။
ဒါဟာ core နဲ့ shell ကိုအတွက် DA signal ကို၏သက်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍဖွယ်ရှိရှုပ်ထွေးကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အထက်ပါလေ့လာမှုအနည်းငယ်လွတ်လပ်စွာသည်ဤတာဝန်များကိုအတွက် shell ကိုနှင့်အမာခံ၏အခန်းကဏ္ဍကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးကြပါပြီ, ဒါကြောင့် DA နိမိတ်လက္ခဏာကို-ခြေရာခံတိရိစ္ဆာန်များအတွက် core ကိုတိုးရိုးရှင်းစွာ mesolimbic လမ်းကြောင်းထဲမှာမက်လုံးပေး DA အချက်ပြမှုများအတွက် generalized တိုးရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ နောက်ထပ်ကျနော်တို့အနေနဲ့အကြွင်းမဲ့အာဏာဌာနခွဲဆော်သြကြသည်မဟုတ်, ကျနော်တို့က TL အချို့ DA လွှတ်ပေးရန်တွေ့ရှိခဲ့O အဓိကထဲမှာ, SL မှ DA ပေမယ့်O shell ကိုအတွက် IS ၏အင်္ဂါရပ်များ (အောက်ခြေအဆင့်မှာနှင့် / သို့မဟုတ်လျော့နည်းတုံ့ပြန်မှုသော်လည်းဒိုင်းနမစ် Task မှ) အခွံထဲမှာ core နဲ့ PE အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, မျိုးသုဉ်းနေစဉ်အတွင်းလှုံ့ဆျောမှုပြောင်းလဲမှုများကြားမှဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ အဲဒီအစားကျနော်တို့ core နဲ့ shell ကိုတစ်ဦးဝေဖန် PE- ဆီသို့ဘက်လိုက်မှုနှင့် striatal ခန္ဓာဗေဒ၏ပိုပြီးတန်းဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်သော IS-type ကို encoding ကပုံစံများ, (ကိုယ်စားပြုကြောင်းအကြံပြုHaber, 2014).
core နဲ့ shell ကို DA အချက်ပြခုနှစ်မော်ဒယ်-based ကွဲပြားခြားနားမှုကိုသဘာဝဆုလာဘ်သင်ယူမှုထက် ကျော်လွန်. အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကနဦးအကြိုးရှိပါတယ်ပေမယ့်ဥပမာ, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, မူးယစ်ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံ (မောင်းတဲ့အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ပြည်နယ်ပြုရန်တွန်းအားပေး, ပြင်းထန်သောဆန္ဒရှိတဏှာ၏ခံစားချက်များကိုသွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်Koob နှင့် Le Moal, 1997) ။ ဖြစ်စဉ်တဏှာ၏ပေါက်ဖွားအဖြစ်လူသိများသော်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေအချိန်ကြာမြင့်စွာ abstinence (မူးယစ်ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးပွားစေGrimm et al ။ , 2001; ဟော်လန်နှင့် Carelli, 2005; Pickens et al ။ , 2011) ။ ခန့်မှန်းရလဒ် (မူးယစ်ဆေးဝါး) သည်ချက်ချင်းနှင့် abstinent အခွအေနေ၌မပြောင်းလဲဖြစ်ပါသည်, သို့သော် abstinent ဘာသာရပ်များအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုပြန်လည်စတင်ရန်လှုံ့ဆျောမှုအတွက်သိသိသာသာတိုးလာသည်။ ဤသည်ကသူတို့အားလှုံ့ဆော်မှု၏မက်လုံးကိုအထူးသိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး abstinence နှင့်ဆက်စပ်သောအပြောင်းအလဲများကိုအခွံတွင်တွေ့မြင်သင့်ကြောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ Relatedly, မူးယစ်ဆေးဝါး - Self- စီမံခန့်ခွဲကြွက်တစ်ခုပြောင်းပြန်စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်သွေးဆောင်ကြောင်းကိုကင်း - ကြိုတင်ခန့်မှန်းအချက်များနှင့်အတူတင်ပြကြသောအခါ, DA အချက်ပြပြောင်းလဲမှုများခွံထဲမှာတိရိစ္ဆာန်၏ဆိုးရွားသောပြည်နယ်ခြေရာခံပေမယ့်အဓိကမဟုတ်ဝီ et al ။ , 2011) ။ စုပေါင်းဤတွေ့ရှိချက်သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှုမှ core နဲ့ shell ကို DA ပံ့ပိုးမှုများကိုနှစ်ဦးစလုံးကသဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်ကိုဖြတ်ပြီးတသမတ်တည်းဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံပါတယ်။
ဇွန်လ 18, 2015 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
တည်းဖြတ်မူဇူလိုင်လ 8, 2015 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
လက်ခံဇူလိုင်လ 15, 2015 ။
ဤလုပ်ငန်းကိုကျနော်တို့ကဒီအလုပျတခုအစောပိုင်းကမူကြမ်းအပေါ်ထင်မြင်ချက်များဒေါက်တာအဲလစ်ဇဘက်အနောက်ကျေးဇူးတင် RMW မှ RMC မှအမျိုးသား MPS သည်မှမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုထောက်ပံ့ရေး DA028156 နှင့် DA035322 အပေါ် Institutes နှင့် DA017318 နှင့် DA034021 ကထောက်ခံနှင့် DA010900 ခဲ့သည်။
စာပေးစာယူဒေါက်တာမိုက်ကယ် Saddoris, စိတ်ပညာနှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံဌာန, တက္ကသိုလ်ကော်လိုရာဒို၏ကျောက်သား, Muenzinger, UCB 345, ကျောက်သား, CO 80309-0345 မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
မူပိုင်ခွင့်© 2015 စာရေးသူ 0270-6474 / 15 / 3511572-11 $ 15.00 / 0
ကြွက်များတွင် cue-ကင်းအသင်းအဖွဲ့များ၏ဝယ်ယူစဉ်အတွင်း phasic dopamine ဂီယာပုံစံများ၏ Real-time ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် (2009) ဒေသဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်။ EUR J ကို neuroscience 30: 1889-1899 ။
Wescott လုပ် SA,
Maren S က,
(2012) ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု differential နျူကလီးယပ်အတွင်း Real-time dopamine ဂီယာဒိုင်းနမစ် modulate core နဲ့ shell ကို accumbens ။ J ကို neuroscience 32: 15779-15790 ။
ဆုလာဘ်လှုံ့ဆျောမှု၏ mesolimbic တွက်ချက်မှု: မက်လုံးပေး salience မှခန့်မှန်းအမှားကနေ (2012) ။ EUR J ကို neuroscience 35: 1124-1143 ။
hedonic သက်ရောက်မှု, ဆုလာဘ်သင်ယူမှု, ဒါမှမဟုတ်မက်လုံးပေး salience: (1998) ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကဘာလဲ? ဦးနှောက် Res ဗြာ 28: 309-369 ။
Matsumoto က M,
စိတ်ခွန်အားနိုးထိန်းချုပ် (2010) Dopamine: ဆုချီးဆန္ဒရှိနှင့်သတိပေးနခွေငျး။ အာရုံခံဆဲလျ 68: 815-834 ။
Budygin EA ၏,
Mateo Y ကို,
dopamine Transporter ခေါက်ထွက်ကြွက်၏နျူကလိယ accumbens ၏ core နဲ့ shell ကိုအတွက် dopamine ရှင်းလင်းရေးအပေါ်ကိုကင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (2002) မရှိခြင်း။ J ကို neuroscience 22: RC222 ။
Cacciapaglia က F,
(2012) ကနျူကလိယအတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်ဒိုင်းနမစ် Differential core နဲ့ shell ကို sucrose များအတွက်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူများ၏ကွဲပြားရှုထောင့်ကိုခြေရာခံ accumbens ။ Neuropharmacology 62: 2050-2056 ။
Cohen ကို JY,
Haesler S က,
Vong L ကို,
Uchida N ကို
အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်အဘို့ (2012) အာရုံခံ-type အမျိုးအစား-တိကျတဲ့အချက်ပြ။ သဘာဝ 482: 85-88 ။
(2010) Phasic နျူကလိယ dopamine လွှတ်ပေးရန် effort- နှင့်နှောင့်နှေး-related ကုန်ကျစရိတ် encodes accumbens ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 68: 306-309 ။
Phillips က PE
mesolimbic dopamine အားဖြင့် (2010) Dissociable ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အနာဂတ်ဆုလာဘ်၏အကျိုးကျေးဇူး encoding က။ နတ် neuroscience 13: 25-27 ။
(2001) Neuroadaptation: ဆုတ်ခွာပြီးနောက်ကင်းတဏှာ၏ပေါက်ဖွား။ သဘာဝ 412: 141-142 ။
(2014) ကို cortico-Basal ganglia ဆားကစ်တစ်ခုထဲတွင် dopamine ၏နေရာအရပ်။ neuroscience 282C: 248-257 ။
Khan က AS,
ကြွက်ပြုမူများ၏ဦးနှောက်ထဲမှာကိုကင်းအပြီး dopamine အတက်အကျများ (2005) အချိန်နှင့်တပြေးညီတိုင်းတာခြင်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 102: 10023-10028 ။
ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေ (2005) Abstinence အဆိုပါ accumbens အတွက်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေ၏အာရုံကြော encoding က heightens ။ Neuropsychopharmacology 30: 1464-1474 ။
(2010) အဆင့်ခန့်မှန်းချက်များနှင့်များ၏ multivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Vivo အတွက် အစာရှောင်ခြင်း-scan ကသိသိ voltammetric ဒေတာ။ စအို Chem 82: 5541-5551 ။
(1997) မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု: hedonic homeostatic dysregulation ။ သိပ္ပံ 278: 52-58 ။
(2013) ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်းထိတွေ့မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှု၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်နှင့်ကြွက်များတွင်လေ့ထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ပေါ်သည်။ PloS One ကို 8: e61355 ။
(2011) နျူကလိယ shell ကို accumbens, ဒါပေမယ့်မရ core ကို, ဆား၏စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးခြေရာခံ။ J ကို Neurophysiol 106: 1537-1544 ။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း, အားဖြည့်ခြင်း, Activity: ကြွက်အားဖြင့် (2000) ကင်း-ရှာ။ Psychopharmacology 152: 123-131 ။
(2014) Phasic mesolimbic dopamine အချက်ပြထပ်ခါတလဲလဲကင်းထိတွေ့မှုအားဖြင့်ထုတ်လုပ်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများ၏ပံ့ပိုးကူညီ encodes ။ Neuropsychopharmacology 39: 2441-2449 ။
Owesson-White က, CA,
Ariansen J ကို,
ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူများ (2009) ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော encoding ကအဆိုပါ accumbens core နဲ့ shell ကိုအတွက် phasic dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူတော့သည်ဖြစ်ပါတယ်။ EUR J ကို neuroscience 30: 1117-1127 ။
(2005) Dopamine ဆဲလ်ဂန္ထဝင်အေးစက်နေစဉ်အတွင်းဟောကိန်းထုတ်ဖြစ်ရပ်များတုံ့ပြန်: အကျိုးကို-သင်ယူမှုကွန်ယက်တွင်အရည်အချင်းပြည့်မီသဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်းဘို့သက်သေသာဓက။ J ကို neuroscience 25: 6235-6242 ။
Peciña S က,
တစ်ခုလုံးကို core နဲ့သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့တိုးမြှင့်မှုအတွက်အလွှာအဖြစ်တစ်ခုသို့ဆက်စပ် medial shell ကို: နျူကလိယ၏ (2013) Dopamine သို့မဟုတ် opioid ဆွအလားတူ cue-ဖြစ်ပေါ်ဆုလာဘ်အတွက် "လို" များကိုချဲ့ထွင် accumbens ။ EUR J ကို neuroscience 37: 1529-1540 ။
Airavaara M က,
Theberge က F,
Fanous S က,
မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏ပေါက်ဖွား၏ (2011) Neurobiology ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience 34: 411-420 ။
ကော်လံကလွဲနေတယ်သွားပြီကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းစဉ်အားအဖြစ် (2004) စွဲလမ်းမှု။ သိပ္ပံ 306: 1944-1947 ။
(2008) ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: စွဲ၏မက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီ: အချို့သောလက်ရှိပြဿနာများကို။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ 363: 3137-3146 ။
(2004) Dopamine အစားအစာရှာတဲ့ subsecond modulator တွေကိုအဖြစ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ J ကို neuroscience 24: 1265-1271 ။
Gallagher M က,
(2005) basolateral amygdala အတွက် Rapid ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ encoding က orbitofrontal cortex နှင့်အတူဆက်သွယ်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အာရုံခံဆဲလျ 46: 321-331 ။
နျူကလီးယပ်အတွက် Pavlovian-to-ဆာလွှဲပြောင်း၏ (2011) ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်စပ်မှု shell ကို accumbens ရွေးချယ်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ potentiated နေကြသည်။ EUR J ကို neuroscience 33: 2274-2287 ။
အဆိုပါ accumbens core နဲ့ shell ကိုအတွက် (2013) Rapid dopamine ဒိုင်းနမစ်: သင်ယူမှုနှင့်အရေးယူ။ တပ်ဦး Biosci (Elite Ed က) 5: 273-288 ။
Deisseroth K သည်,
(2015) Mesolimbic dopamine သည် dynamically ခြေရာခံများနှင့်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်တန်ဖိုးကို-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ discrete ရှုထောင့်, ဆက်စပ်နေပါတယ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 77: 903-911 ။
Setlow B က,
Gallagher M က
(2003) Encoding cue နမူနာစဉ်အတွင်း orbitofrontal cortex အတွက်ရလဒ်နှင့်ဝယ်ယူတန်ဖိုးကိုခန့်မှန်း basolateral amygdala ကနေ input ကိုအပေါ်သို့မူတည်ပါတယ်။ အာရုံခံဆဲလျ 39: 855-867 ။
ခန့်မှန်းအမှား (2000) အာရုံခံနိုင်တဲ့ coding ။ Annu ဗြာ neuroscience 23: 473-500 ။
Smith က KS,
(2011) မက်လုံးပေး salience ကနေအပျော်အပါး Disentangling နှင့်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry အတွက်အချက်ပြသင်ယူခြင်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 108: E255-E264 ။
(2012) Phasic နျူကလိယ dopamine အန္တရာယ်-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချအပြုအမူ encodes accumbens ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 71: 199-205 ။
မက်လုံးပေး salience ၏ (2009) Dynamic တွက်ချက်မှု: ဘယ်တော့မှခဲ့ရာ "လို" "ကြိုက်တယ်။ " J ကို neuroscience 29: 12220-12228 ။
တစ်ဦးသောအခြေအနေများတားစီးပါရာဒိုင်းအတွက် dopamine အာရုံခံအားဖြင့်ခန့်မှန်းဆုလာဘ်ပျက်ကွက်၏ (2003) ကုဒ်။ J ကို neuroscience 23: 10402-10410 ။
Waelti P ကို,
(2001) Dopamine တုံ့ပြန်မှုတရားဝင်သင်ယူမှုသီအိုရီ၏အခြေခံယူဆချက်ကိုလိုက်နာ။ သဘာဝ 412: 43-48 ။
(2012) Phasic mesolimbic dopamine ရှေ့အချက်ပြနှင့်တစ်ဦး Self-အစပျိုးအရေးယူ sequence ကိုတာဝန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 71: 846-854 ။
(2013) Phasic mesolimbic dopamine လွှတ်ပေးရန် pavlovian-to-ဆာလွှဲပြောင်း၏စကားရပ်စဉ်အတွင်းရှာကြံဆုလာဘ်ခြေရာခံ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 73: 747-755 ။
(2011) ကိုကင်းတွေကိုဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်ထဲမှာ context-မှီခိုဆိုင်းဆန့်ကျင်မောင်းထုတ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 69: 1067-1074 ။
ဆုလာဘ်များတိုးမြှင့်မြှင့်တင်ရန် "ကဲ့သို့" သို့မဟုတ်တုံ့ပြန်မှုအားဖြည့်ခြင်းမရှိဘဲ "လို": (2000) စိတ်ကြွဆေး sucrose ဆုလာဘ်၏အခြေအနေမက်လုံးပေး salience တိုးပွါးအချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens ။ J ကို neuroscience 20: 8122-8130 ။
(2011) Demon voltammetry နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ software ကို: မျိုးစုံ kinetic အစီအမံကို အသုံးပြု. dopamine အချက်ပြအတွင်းကိုကင်း-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ J ကို neuroscience နည်းလမ်းများ 202: 158-164 ။
Zhang က J ကို,
(2009) မက်လုံးပေး salience ၏တစ်ဦးကအာရုံကြောကွန်ပျူတာမော်ဒယ်။ PLoS computing Biol 5: e1000437 ။